September 2009 | အရှင်ဇ၀န
“Let us go for dinner all all all”
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်များသည် မိမိတို့၏ သာသနတက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ညစာ စားချိန်ရောက်သောအခါ သာသနတက္ကသိုလ်မှ အရာရှိတစ်ယောက်သည် ထိုဧည့်များကို ထမင်းစားဖတ်ရန်ရောက်ရှိလာသည်။ သာသနတက္ကသိုလ်မှ စာသင်သားသံဃာတော်များက ထိုအရာရှိကြီးကို အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဟု ယူဆထားကြသည်။ ထိုအရာရှိကြီးမှလည်း သူအင်္ဂလိပ်စာတတ်ကြောင်းကို သံဃာတော်များကို သိစေချင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆောင် (၂၁)တွင် တည်းနေသော ဧည့်သည်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကျယ်လောင်စွာ ဖိတ်မန္တကပြုလေသည်။
ထိုအရာရှိကြီး၏ ညစာစားသောက်ရန် ပင့်ဖိတ်သောအသံကို ကြားကြရသော သံဃာတော်များသည် ဟားတိုက်၍ ရယ်ကြလေသည်။
နောက်ရက်ညနေခင်း ထိုအရာရှိကြီးသည် ဧည့်သည်များကို ပင့်ဖိတ်ရန်ရောက်လာတိုင်း ထိုအရာရှိကြီးသည် ဧည့်သည်များကို ညစာစားသုံးဘို့ရန် မဖိတ်ခင် ထိုဧည့်သည်များအဆောင်နှင့် နီးကပ်လျှက် နေထိုင်သီတင်းသုံးတော်မူသော သံဃာတော်တစ်ပါးက
”Let us go for dinner all all all” အော်ပြောလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ အရာရှိကြီးလာတိုင်း သံဃာတော်များက အော်နေသောကြောင့် ထိုအရာရှိကြီးလည်း ကိုယ်တိုင်မလာရဲတော့ဘဲ သူ့တပည့်တယောက်ကို ဖိတ်မန်ခိုင်းလေတော့သတည်း။
Posted by AShin Javana at 8:16 PM0comments
တစ်နှစ်က မိမိသည် ရွာတွင် ၀ါဆိုခဲ့သည်။ မိမိ ရွာတွင် ၀ါဆိုသော နှစ်၌ အိမ်မှ စပါးခင်းသည် ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်နေသည်။ မိမိ၏ ဆွေမျိုးအချို့ကပင်
“ဦးဇင်း ဒီနှစ် ရွာမှာ ၀ါဆိုလိုက်မှ ဦးဇင်းတို့ရဲ့ စပါးခင်းကလဲ ကောင်းလိုက်တာ၊ ဦးဇင်းနဲ့ ကံစပ်တယ် ထင်တယ်“ ဟု ပြောဆိုလာကြသည်။ အဲဒီကဲသို့ဆွေမျိုးတွေက ပြောလာတော့ မိမိသည်ပင် ကိုယ်ကိုကိုယ်
“အော် ငါဟာ ရှေးဘုန်းရှေးကံ နည်းဟန်မတူဘူး”ဟု အထင်ကြီးမိခဲ့သည်။ ဒီလိုနှင့် မိမိတို့၏ စပါးခင်းတွေလည်း မှည့်ပြီဖြစ်၍ နွေးစပါးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ၀ါခေါင်လလောက်ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ မိမိ၏ မိခင်ကြီးအမှူးပြုသော မိသားစုအားလုံး စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ စပါးများနယ်ကြသည်။ နောက်ဆုံး စပါးပုံကြီး သည် အိမ်ရှေ့ထည်းထည်းကြီးပါ၊ မိမိသည်ပင် ထိုစပါးပုံကြီးကြည့်ကာ
“အင်း ဒီနှစ် အိမ်က မယ်တော်ကြီးတော့ စပါးတွေ တော်တော်ရမှာ၊ သင်္ကန်းအကောင်းစာ တစ်စုံလောက်တော့ ၀ယ်ခိုင်းရအုံးမယ်” ဟု ကျောင်းကနေ စိတ်ကူးယဉ်နေမိသည်။ အိမ်က မိသားစုတွေလဲ စပါးများကို စပါးကျည် ထဲတွင် ထည့်ဘို့၇န် ပြင်ဆင်နေစဉ် ကုက္ကိုစုရွာမှ ဦးဓာတ်ပြားတစ်ယောက် နွားလှည်းကြီးနှင့် အိမ်ရောက်လာသည်၊ ပြီတော့ မိမိ၏ မယ်တော်ကြီးကို
“ဒေါ်ကြည်ခင်ရေ ပြောရမှာတော့ အားနားပါတယ်၊ ခင်ဗျားသား အောင်မြင့်ရှိန် ဂျင်ထိုးတယ်၊ ဂျင်ရှုံးတုံးက ကျုပ်ဆီက ငွေချီတယ်လေ၊ စပါးပေါ်ရင် ပေါ်သမျှ စပါးအားလုံးနဲ့ ဆပ်ပါ့မယ်ပြောလို့ ကျုပ်လဲ သူ့ကို ငွေချီး လိုက်တယ်။ ယခုထွက်မယ့် စပါးအားလုံး လာယူတာပါပဲဗျာ၊” ဟု ပြောလေသည်။ အိမ်သားအားလုံးလဲ ဒေါသ ထွက်ထွက်နှင့် စပါးအားလုံးပေးလိုက်ရသည်။ ညအခါမှာတော့ အိမ်သားအားလုံးနှင့် ကိုအောင်မြင့်ရှိန်(မိမိ၏ အသုံးမကျသော တတိယမြောက်အကို)တို့ အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအချိန် မိမိသည် ဆရာသမားနှင့် စကားပြောနေသည်၊ထိုသတင်းကို ရွာအတွင်းမှ မောင်ကျော်မင်းကြည်လာပြောသဖြင့် မိမိနှင့် မိမိ၏ ဆရာသမားတို့ သိကြရသည်။ မိမိဆရာသမားကပင်
“လိုက်သွားကွာ မောင်ဇ၀န၊ အသုံးမကျတဲ့ကောင် နောင် ဂျင်ဝိုင်း(လောင်းကစားတစ်မျိုး)ကို မသွားနိုင်အောင် ခြေထောက်ကျိုးအောင် ရိုက်ချိုးခဲ့၊ ပြီးမှ လုပ်ကျွေးရင် ကျွေးရပါစေ၊” ဟု မိန့်ကြားလေသည်။သို့ဖြစ်၍ မိမိလည်း ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နှင့် ဒုတ်တစ်ချောင်းကို ကိုင်ကာ အိမ်သို့ လိုက်သွားလေတော့သည်၊ အိမ်ရောက်သွားသောအခါ
“ဘယ်မလဲ မိဘကို ဒုက္ခပေးတဲ့ အသုံးမကျတဲ့ကောင်! နောင် ဂျင်းဝိုင်း မသွားနိုင်အောင်လို့ ခြေထောက်ကို ရိုက်ချိုးပစ်မယ်”ဆိုပြီး အိမ်ထဲကို ပြေးဝင်သွားသည်၊ ဘေးမှ လူကြီးများက ၀ိုင်းတားသဖြင့် အကိုဖြစ်သူထံကို မရောက်လိုက်ပါ၊ မိမိသည် မရိုက်ရသော်လည်း အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းနေမိခဲ့သည်။ ထိုအခါ အကိုဖြစ်သူ အမူးသမားသည်
“ဒါလောက်တောင် ဒေါသကြီးနေတာ၊ ဒါလားကွ တရားသမား” ဟု မိမိကို လူအများထဲတွင် ပြန်၍ အော်လိုက် လေသည်။ထိုအခါ မိမိစဉ်းစာမိသည်ကတော့
“အော် အမူးသမားပါစပ်ကလဲ တရားစကားထွက်သေးသားပဲ၊ ငါကိုယ်တိုင်ကလဲ ဒေါသနဲ့ သွားပြီး ဆုံးမမိတာကိုး၊” ဟု ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်သာလျှင် ကျောင်းသို့ ပြန်လာခဲ့ရလေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု အတိအကျ ချလိုက်မိသည်ကတော့ နောင် အမူးသမားများကိုတော့ ဝေရာမဏိ၊ ဝေးဝေးက ရှောင်ကြဉ် ပါ၏။ “ဒေါသနှင့် ပြုလုပ်သော အမှုသည်ကား ဘယ်သောခါမျှ မအောင်မြင်ပါတကား” ဟု ဓမ္မသံဝေဂ လည်း ရလိုက် ပါပြီ။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများနှင့် မိမိတို့၏ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ ဆရာ တော်တစ်ပါးသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့၏ ပင့်ဖိတ်ချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ကြွသွား တော်မူကြသည်။ ထိုဆရာတော်များအဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်၌ ဂျပန်လေယာဉ်ကို စောင့်ကြရသည်၊ ထိုသို့ စောင့်နေစဉ် သက်တော်အကြီးဆုံး ၀ါတော်အကြီးဆုံး ဆရာတော်ကြီးသည် ကျင်ငယ်သွားလိုသည်၊ ဆရာ တော်ကြီးသည် အင်္ဂလိပ်စကားကလဲ မပြောတတ်တော့ အနီးရှိ မိမိတို့တက္ကသိုလ်မှ ဂျပန်စကား အင်္ဂလိပ် စကားပြောတတ်တော်မူသော ဆရာတော်ကို
“ဆရာတော် တပည့်တော် ကျင်ငယ်သွားချင်တယ်၊ အိမ်သာက ဘယ်နားနေမှန်းလဲ မသိဘူး၊ အဲဒါလိုက် ပို့ပါအုံးဘုရား” ဟူ၍ အကူအညီတောင်းလာသည်၊ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတော်ကြီးသည်လည်း အားကြိုးမာန်တက်
“အော် ဆရာတော် ရပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်” ဟုဆိုကာ ဆရာတော်ကြီးကို လက်တွဲ ခေါ်သွား ကာ အိမ်သာသို့ လိုက်ပို့လေတော့သည်။ အိမ်သာသိုေ၇ာက်သောအခါ
“ဆရာတော်ဘုရား အိမ်သာကို အင်္ဂလိပ်လို ထိုအိလက်(Toilet)လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရား၊ ဆရာတော်တို့က နိုင်ငံခြား မကြာ မကြာ ကြွရမှာဆိုတော့ တခါတည်းသာ မှတ်ထားပါတော့ဘုရား” ဟုမိမိတို့ တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတော်သည် ထိုနိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးကို အိမ်သာကို လိုက်ပို့ရုံမျှက အင်္ဂလိပ် အိမ်သာကိုပါ သင်ပေးလိုက်လေတော့သည်။ ဆရာတော်ကြီးလဲ “အိမ်သာ ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို့ ထိုအိလက်”ဟု မှတ်ထားလေတော့သည်။ တစ်နေ့ ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သာသနာရေး ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် မိမိတက္ကသိုလ် သို့ ရောက်ရှိလာလေသည်။ ဆရာတော်ကြီးရောက်လာသည်ဖြစ်၍ တက္ကသိုလ်တက်နေသော ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်သည် သူ့၏ ဆရာသမားဆရာတော်ကြီးကို သွားရောက်ပြုစုသည်၊ ထို့သို့ ပြုစုနေစဉ် ဆရာတော်ကြီးက
“မောင်ပဇင်း 'ထိုအိလက်'ထဲမှာ ထွေးခံရှိတယ်၊ သွားယူစမ်းကွယ်”ဟု မိန့်ကြားလေသည်၊ ထိုအခါ တပည့်ဖြစ်သူက
“ဆရာတော် 'ထိုအိလက်' ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲဘုရား၊ တပည့်တော် နားမလည်းဘူးဘုရားဟု ပြန်လည် မေးမြန်းလျှောက်ထားလေသည်၊ဤတွင်ဆရာတော်ကြီးက
“မင်းကလဲ တက္ကသိုလ်တက်နေပြီ 'ထိုအိလက်'တောင်မသိဘူး၊ ထိုအိလက်ဆိုတာ အိမ်သာကို ပြောတာကွာ”ဟု ရှင်းပြလေသည်။ထိုအခါမှ တပည့်တော်ဖြစ်သူက
အိမ်သာကို 'ထိုအိလက်' အသံထွက်တယ်လို့ ဆရာတော်ကို ဘယ်သူပြောလဲဘုရား”ဟုမေးမြန်းလေသည်၊ ထိုအခါ ဆရာတော်ကြီးက
မင်းတို့ တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာဌာနက ဆရာတော်( )က ပြောတာပါဗျာ”ဟု မိန့်ကြားတော်မူလေသည်၊ ထိုအခါမှ တပည့်ဖြစ်သူက
“ဆရာတော်ဘုရား အိမ်သာ(toilet)ကို ထိုအိလက်လို့ အသံမထွက်ပါဘူးဘုရား၊ အိမ်သာ(toilet)ကို တွိုင်းလက် သို့မဟုတ် ထွိုင်းလက်လို့ အသံထွက်ပါတယ်ဘုရား”ဟု တပည့်ဖြစ်သူက အသံထွက်မှန်ကို သင်ပြပေးလိုက်လေ တော့သတည်း။တက္ကသိုလ်မှ မိမိတို့၏ ဆရာသမား၏ အသံထွက်ကိုလဲ မှားသည်ဟု မည်သူမျှ မပြောနိုင်ပါ၊ Toiletကို ပုဒ်ခွဲလိုက်သော် toကို ထို၊ i ကိုအိ၊ let ကို လက်ဟူ၍ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပေတည်း။
(`ဤစာမျက်နှာ၏ အဆုံးတွင် older posts ကို နှိပ်လိုက်ပါ ပုံပြင်များစွာကို တွေ့ပါလိမ့်မည်)
Posted by AShin Javana at 12:07 AM0comments
“အို ဒကာမ ဒကာမအပေါင်းတို့”
တစ်ခါက ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းက ရွာတစ်ရွာတွင် ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပျံလွန်တော်မူသွား သည်၊ ထိုရွာမှ လက်ထောက်ဆရာတော်များနှင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများသည် တက်ညီလက်ညီ ဆရာဒကာ ညီညွတ်တိုင်ပင်ကာ ဆရာတော်၏ ဈာပနပွဲကို ဇာတ်ပွဲကြီးများနှင့် စီကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြသည်၊ ပထမနေ့ ဇာတ်မကမီ ထိုရွာသားစစ်စစ်ဖြစ်သော အခြားအရပ်တွင် ကျောင်းထိုင်နေသော ဆရာတော်ဦးဝါယမ သည် ဇာတ်စင်ပေါ်တက်၍ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကို တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ရန်မဖြစ်ရန် အေးဆေးစွာ ကြည့်ရန် သြ၀ါဒစကားပြောကြားရမည်ဖြစ်သည်၊ ဆရာတော်ဦးဝါယမသည် ပရိသတ်ကို အလွန်ကြောက် တတ်သည်၊ သူသည် အထက်က ဆရာတော်များ ရပ်ရွာလူကြီးများ၏ တိုက်တွန်းလျှောက်ထားချက်ကြောင့်သာ မလွှဲမရှောင်သာ၍ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်ဦးဝါယမသည် ဓားကို ကိုင်လျှက် ပွဲကြည့် ပရိသတ်အတွင်းမှ ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့သည်၊ ထိုစဉ် ပရိသတ်အတွင်းမှ အမျိုးသမီးများက
“အဲ ဦးဇင်း ၀င်းမောင်ကြီးတော် ဘယ်တုံးက ကြွလာတယ်မသိဘူး၊” ဟု ပြောဆိုကြသည်၊ တချို့အမျိုးသား များကလည်း
“ဟ ဦးဇင်း ၀င်းမောင်ကြီး ဘယ်တုံးက ပြန်ကြွလာတယ် မသိဘူး၊ လက်ထဲမှာလဲ ဓါးကြီးနဲ့ ၊ ဒီနေ့ညတော့ အပြတ်ကြမ်းမယ်နဲ့တူတယ်”၊ ဟု ပြောင်သလိုလိုနှင့် ပြောဆိုကြသည်၊ ဆရာတော်ဦးဝါယမသည် ထိုကဲသို့သော ပြောင်လျှောင်သော အသံများကို ကြားလေလေ ကြောက်လဲကြောက် ရှက်လဲရှက် ဒေါသလဲထွက်ဖြစ်ရလေ သည်၊ နောက်ဆုံးတွင် ဆရာတော်ဦးဝါယမသည် ဇာတ်စင်ပေါ်သို့ ရောက်သွားလေသည်။ ဆရာတော်သည် ဇာတ်စင်ပေါ်ရောက်သောအခါ လက်တစ်ဖက်က ဓားကို ကိုင်သည်၊ တခြားလက်တစ်က မိုက်ကို ကိုင်လျှက် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေသည်၊
“အို ဒကာမ ဒကာမအပေါင်းတို့ ယနေ့ညတော့ ဆူမယ်မကြံနဲ့၊ ဆူလို့ကတော့ ဒီဓားသာ ကြည့်” ဟု ရဲဝန့်ပြတ်သားစွာ မိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေသည်၊ သို့သော် “အို ဒကာ ဒကာမအပေါင်းတို့” ဟူ၍ ပြောရမည့် အစား “အို ဒကာမ ဒကာမအပေါင်းတို့”ဟူ၍ မှားပြီး ပြောလိုက်သောအခါ ပရိတ်သတ်က မကြောက်သည့်အပြင် ဟားတိုက်ကာ ရယ်ကြလေတော့သည်၊ ဆရာတော်သည် ပရိသတ်၏ တဟားဟားရယ်လိုက်သော အသံကြောင့် ရှက်ရှက်နှင့် ခေါင်းကို ငိုက်စိုက်ချလျှက် ဇာတ်စင်နောက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် ၀င်သွားရာ ဇာတ်စင်ဒေါင့်က ကားလိပ်ကြိုးနှင့် ဆရာတော်၏ လည်ပင်းကို ချိတ်နေလေတော့သည်၊ ဆရာတော်၏ အဖြစ်ကို ကြည့်၍ ပရိသတ်ကြီးသည် အူလှိုက်သဲလှိုက် ရယ်ကြရလေတော့သတည်း။ မိမိကောက်ချက်ချမိသည်ကား
“အော် ဒီနေ့ညတော့ ဆရာတော်ဦးဝါယမလုပ်ပုံနဲ့ လူရွှင်တော်တွေတော့ ငိုရတော့မယ်နဲ့တူတယ်”။ ဟူ၍သာ ဖြစ်သတည်း။
Posted by AShin Javana at 8:59 AM0comments
“အလကားရသော မကျည်းရွက်ကို ခူးရောင်း၍ အရှုံးပေါ်သူ”
မိမိတို့၏ အညာဒေသသည် နွေရာသီရောက်ပြီဆိုလျှင် အလွန်ပူသည်၊ အသက်အရွယ်ကြီးမားသော အဘိုးအ ဘွားများသည်ကား အညာနွေ၏ ပူပြင်းသော ဒဏ်ကို အလူးအလဲ မချိမဆံ့ ခံစားကြရသည်၊ နွေရာသီရောက် လျှင် မိမိတို့၏ အဘိုးအဘွားများသည်
“အမလေး ပူလိုက်တာ ရေနွေးအိုးထဲ ပြုတ်ထားသလိုပဲ၊ အိုက်ပြုတ်ကြီးပဲ၊ မိုးကလဲ မရွာဘူး၊”ဟူ၍ စသည်ဖြင့် ညည်းညူကြလေသည်၊သို့သော် မိမိသည်ကား လူငယ်ပီပီ နွေရာသီကို မျှော်သည်၊ နွေရာသီကို ပျော်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နွေရာသီတွင် မကျည်းရွက်များနုသည်၊မိမိသည် ငယ်စဉ်က နွေရာသီတွင် နုသော မကျည်းရွက်ကို ခူးရောင်းရသောကြောင့်ပေတည်း၊ ၊ ပူပြင်းသော နွေရဲ့ဒဏ်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်နိုင်ပါ၊ ငယ်ရွယ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ ပူသည်ကိုပင် မသိနိုင်ခဲ့ပါ၊ နွေရာသီမှာ မိမိသည် အဖော်များနှင့်အတူ မကျည်ရွက်ခူးရောင်းခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့သည်၊ ပျော်နေခဲ့သည်၊ အချို့သော မိန်းခလေးများသည်လည်း ထိုမကျည်ရွက်ခူးရောင်းခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်၊ ပျော်နေကြသည်။မိမိတို့သည် ထိုခူး၍ ရသော မကျည်းရွက်များကို ရွာထဲလှည့်၍ ရောင်းကြသည်၊ တစ်နေ့ မိမိတို့သည် မကျည်းရွက်ရောင်း၍ ပြန်လာသည်၊ လမ်းတွင် မကျည်းရွက်ဗန်းကြီးခေါင်းပေါ်ရွက်လာသော မာမာအေးကို တွေ့လေရာ မိမိက
“ဟ မာမာအေး နင်မကျည်းရွက်တွေ ရောင်းမကုန်သေးဘူးလား၊ ဘယ်သူမှ ၀ယ်သူမရှိသေးဘူးလား၊ ”ဟု မေးလိုက်လေသည်၊ ထိုအခါ မာမာအေးက
“ကိုခင်မောင်ဝင်းကတော့ ငါ့ကို တမတ်နဲ့ ရောင်းမလား”၊လို့ မေးပါတယ်၊ ၀ယ်ပါတယ်၊ နည်းလို့် မရောင်းတော့ ဘူး၊ ကူမဲဈေးပဲ သွားရောင်းတော့မယ်၊ ဈေးမှာရောင်းရင် ငါးမူးလောက်တော့ ရမှာဟ”ဟူ၍ ပြောသွားရှာသည်၊ သို့နှင့် မာမာအေးသည် သူခူးထားသော မကျည်ရွက်ကို နံနက်စောစောထပြီ ဈေးသွားရောင်းသည်၊ မာမာ အေးတစ်ယောက် နေ့လည် တစ်နာရီလောက်မှာ ငိုယိုပြီး ပြန်လာသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ရွာမှ လူကြီးများက သူမ ငိုပြန်လာရခြင်း၏ အကြောင်းကို မေးကြလေသည်၊ သူမသည် အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြလေသည်။
“ကျမ နံနက်စောစော ကူမဲဈေးထဲမှာ လမ်းဘေးချပြီး မကျည်းရွက်ကို ရောင်းနေတာ၊ မကျည်ရွက်က မရောင်း ရသေးဘူး၊ သေချင်းဆိုး ဈေးကောက်က ရောက်လာတယ် ၊ဈေးကောက်ကို ပေးစရာပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့ သူများဆီ ကို ပိုက်ဆံသွားချီးနေတုံး ရုတ်တရက် ဈေးထဲနွားတစ်အုပ်ဝင်လာပြီး၊ ကျမ မန်ကျည်းရွက်ဗန်းကို တက်နင်းသွား တယ် ဘကြီးတို့ရယ်” ပြောကာ မာမာအေးတစ်ယောက် သနားသဖွယ် အော်ငိုရှာလေတော့သတည်း။
ဤသည်ကား အလကားရသော မကျည်းရွက်ကို ခူးရောင်း၍ အရှုံးပေါ်သော မိမိတို့၏ရွာမှ မာမာအေး၏ ဖြစ်ရပ် မှန် ဇာတ်လမ်းအစစ်ပေတည်း။
Posted by AShin Javana at 8:10 AM0comments
တခါက အထက်အညာမှာ ရခါစ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့ရှိကြလေသည်၊ သူတို့သည် မင်္ဂလာဆောင်စဉ်က အမျိုးသား၏ မိဘများဘက်မှ အိမ်တစ်လုံးရသည်၊ ပြီးတော့ အတွင်း၌ မှန်တစ်ချပ်ပါဝင်သော ထန်းခေါက်ဖာတစ်လုံးကို အမွေရကြလေသည်။ တစ်နေ့ အမျိုး သားလေးသည် ထိုထန်ခေါက်ဖာလေးကို ဖွင့်ကြည့် လိုက်သည်၊ သူသည် အတွင်း၌ ကောင်းလေးတစ်ယောက် ရှိနေသည်ကို ထူးခြားစွာတွေ့ရလေသည်၊ သူသည် တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ မြင်ဖူးလေတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေလေသည်၊သူသည်
“အော် အလွန်အင်မတန်မှ သေးငယ်သော ထန်းခေါက်ဖာလေးအတွင်းမှာ ဒီကောင်လေးက ဘယ်လိုများ ၀င်နေ ပါလိမ့်၊ အသက်ရှုမကြပ်ဘူးလားမသိ၊ အော် ငါ့ရဲ့မိဘတွေကများ ဘယ်လိုပညာတွေနဲ့ ဒီကောင်းလေးကို ထည့်ထား တယ်မသိ၊”ဟု စဉ်းစားနေတော့သည်၊ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီထန်ခေါက်ဖာအတွင်းမှ ကောင်လေးကိုဘဲ လာကြည့်နေသည်၊သူ၏ ရခါစ ဇနီလေးကိုပင် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပေ၊ဇနီးသည်ကလည်း ရိပ်မိလာသည်။ သူမ သည်လည်း
“ငါ့ယောင်္ကျားတော့ နေ့ရှိသရွေ့ ဒီထန်းခေါက်ဖာလေးကိုဘဲကြည့်နေတာ၊ ငါ့ကိုလဲ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး၊ ဒီထန်း ခေါက်ဖာလေးဟာ တစ်ခုခု ထူးခြားမှုတော့ရှိရမယ်”ဟု စဉ်းစားကာ သူမ၏ အမျိုးသားအပြင်သွားစဉ် ထန်းခေါက် ဖာကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေသည်။ ထိုအမျိုးသမီးလေးသည်
“အော် ငါ့ယောင်္ကျားဟာ ငါ့ကို ဂရုမစိုက်တာ ဒီအတွင်းက အမျိုးသမီးလေးနဲ့ချစ်နေလို့ဘဲ၊ ဟုတွေးတောကာ ငိုယိုပါတော့သည်။ သူမ၏ အမျိုးသားကိုလဲ တိုက်ရိုက်မပြောဝန့်ပေ၊ ဒီလိုနဲ့ အမျိုးသမီးလေးသည် သူမ၏ ယောင်္ကျားကိုလည်း ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပေ၊ နေ့စဉ် ထန်းခေါက်ဖာလေးအနီးမှာ ထိုင်၍ ငေးမှိုင်နေတော့သည်၊ အမျိုးသားလေးကလည်း
“ငါ့ ဇနီး ခုတလော ငါ့ကိုလဲ ဂရုမစိုက်၊ ထန်းခေါက်ဖားလေးနား သွားကာ ထိုင်ထိုင်နေတယ်၊ တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားမှုရှိရမယ်၊”ဟုဆိုပြီ သူ၏ ဇနီးချောလေးမရှိခိုက် ထန်းခေါက်ဖာလေးကို သွားရောက်ဖွင့်ကြည့်လေသည်၊ ဤတွင် အမျိုးသားလေဟာ
“အော် ငါ့ဇနီးသည်ဟာ ငါ့ကို မချစ်ဖူး၊ ဒီထန်ခေါက်ဖာအတွင်းက အမျိုးသားလေးနဲ့ချစ်နေကြာတာကိုး”ဟု သူ၏ ဇနီးသည်အပေါ် တစ်မျိုးထင်သွားလေသည်။ သည်လိုနှင့် အလွန်အင်မတန်မှ ချစ်လှစွာသော ဇနီးမောင်နှံတို့ သည် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မခေါ်နိုင်၊ မပြောနိုင်ဖြစ်သွားကြသည်။ ထိုခေတ်ထိုကာလက ရွာအတွင်း ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က ရှင်းပေးမြဲဖြစ်သည်၊ သို့ဖြစ်၍ ထိုပြဿနာသည်လည်း ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံရောက်ရှိသွားသည်၊ ဆရာတော်သည် နှစ်ယောက်လုံးကို မေးစီစစ်လေသည်၊ ကောင်မလေးက သူ၏ ယောင်္ကျားသည် ထန်းခေါက်ဖာအတွင်းက ကောင်မလေးနှင့် ဖြစ်နေကြောင်း လျှောက် ထားလေသည်၊ ကောင်းလေးကလဲ သူ၏ ဇနီးဟာ ထန်းခေါက်ဖာအတွင်းက ကောင်လေးနှင့် ဖြစ်နေကြောင်း လျှောက်ထားလေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်သည် ထန်းခေါက်ဖာအတွင်း ထိုဇနီးမောင်နှံတို့ပြောသလို ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးရှိ မရှိဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်၊ ဖွင့်ကြည့်ပြီးသောအခါ ဆရာတော်သည်
“အေ မင်းတို့ပြောတော့ ဒီထန်းခေါက်ဖာအတွင်းမှာ ကောင်းလေးရှိတယ်၊ ကောင်းမလေးရှိတယ်နဲ့ ၊ ငါတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ ငါ့ဆရာသမားဓာတ်ပုံဘဲတွေ့ပါတယ်ကွယ်၊ ဟုပြောပြီး ထိုဓာတ်ပုံကို သိမ်းကာ၊ ထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သည်းခံရမယ်၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်ရမယ်၊ ချစ်ချစ် ခင်ခင်နေရမယ်၊ ဆုံးမပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်လေတော့သည်၊ဆရာတော်၏ လက်အတွင်းသို့ ထိုထန်း ခေါက်ဖာနှင့် မှန်ကလေးတို့ ရောက်သွားချိန်မှစ၍ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့သည်လည်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နှင့်ပေါင်းသင်း နေထိုင်သွားကြလေတော့သတည်း။ ဆရာတော်သည်ကား ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပျံလွန်တော်မူသွားသော သူ့ဆရာ သမား၏ ဓာတ်ပုံကို အပြတ်အသတ်ကို ပူဇော်ကန်တော့မည့်ဟန်ရှိပါပေသည်တကား။
Posted by AShin Javana at 4:34 AM0comments
တစ်ခါက တောမှ ဒါယကာကြီးတစ်ယောက်သည် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို ဖူးရန် မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိလာ သည်၊ သူသည် မဟာမြတ်မုနိဘုရားဖူးရန်နှင့် ဘုရားကြီးကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်ရန်ဖြစ်သည်၊သူသည် ဘုရားကြီး အရှေ့မုခ်သို့ရောက်သောအခါ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသည်၊ ဤသည်ကိုသိသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သည် သူမ၏ ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်လာပြီး အဘိုးကြီးကို သွားရောက်နှုတ်ဆက်လေသည်၊
“အဘိုး ဘယ်ကလာတာလဲ ၊ ဘယ်မှာတည်းမှာလဲ ၊ ဘာကိစ္စဖြင့် ဒီကိုလာတာလဲ” မေးလေသည်။ထိုအခါ အဘိုးကြီးသည်
“ငါ့မြေးရေ အဘိုးက တောက လာတာ၊ ဘုရားဖူးရင်း ရွှေသင်္ကန်းကပ်ရင်းပေါ့။” ဟုဖြေကြားလေသည်။ ထိုအခါ အမျိုးသမီလေးက
“အဘိုး ရွှေသင်္ကန်းကပ်ရင် သမီးတို့ဆိုင်မှာဘဲ ရနိုင်ပါတယ်၊ သမီးတို့ဆိုင်မှာ တည်းလို့လဲရပါတယ်၊ သမီးတို့က ထမင်းလဲ ကျွေးအုံးမှာပါ” ဟု ပြောသဖြင့် အဘိုးကြီးလဲ ထိုအမျိုးသမီးလေး ခေါ်ရာနောက်ပါသွားလေသည်၊ ထိုအ မျိုးသမီးလေး၏ ဆိုင်၌ တစ်ညတည်း၍ ငွေ (၄၀)ကျပ်တန်ရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းကိုလည်း ထိုဆိုင်မှ ၀ယ်ခဲ့လေသည်၊ ထိုခေတ် ထိုအခါက ၄၀ကျပ်သည် အလွန်အင်မတန်မှ တန်ဖိုးကြီးလှလေသည်၊ ထိုအဘိုးကြီသည် ထိုရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းကို မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို သွားရောက် ကပ်လှူလေသည်၊ ထိုနောက် သူသည် မန္တလေးမှ ရွာသို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်၊ သူသည် ရွာရောက်လျှင် ရောက်ချင်းဘဲ သားသမီးများကို အမျိုးသမီး ကလေးတစ်ယောက်၏ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တည်းခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးနောက် ရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းကိုလည်း ထိုအမျိုး သမီးကလေးဆိုင်မှ ၀ယ်ယူ၍ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း ၀မ်းသာအားရ ပြောကြားလေသည်။ ဤတွင် သမီးအကြီးက
“အဖေ ရွှေဆိုင်း တစ်ဆိုင်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရသလဲ”ဟူ၍ မေးလေသည်၊ ထိုအခါ ဖခင်ဖြစ်သူက
“အေး ရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းကို (၄၀)ကျပ်ပေးခဲ့ရတယ်”ဟု ပြောကြားလေသည်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ အဖြေစကားကို ကြားရသောအခါ သမီးများက
“အဖေတော့ အလိမ်ခံလိုက်ရပြီ၊ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်းမှ အလွန်ဆုံး ၃၀ ကျပ်ဘဲပေးရတယ်၊”ဟူ၍ ပြောကြလေ သည်။ ဤတွင် ဖခင်ဖြစ်သူက
“ငါကတော့ လေးဆယ်ကျပ် တန်ရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းပေးပါ၊ ဘုရားကြီးလှူဒါန်းချင်လို့ပါ ”လို့ပြောတာဘဲ၊ သူတို့ ညာတာတော့ ငါလဲဘယ်သိမလဲ၊ ငါကတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးလေး အိမ်မှာ တစ်ညအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ ထမင်းနှစ် နှပ်စားခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့် ငါကတော့ မရှုံးဘူး၊ ရှုံးခြင်းရှုံး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးသာ ရှုံးတယ်ဟေ”ဟူ၍ ပြောကြားလိုက်လေတော့သတည်း။
Posted by AShin Javana at 9:12 AM0comments
တစ်ခါက ဆရာတော်တစ်ပါးသည် တရားဟောနေသည်၊ ထိုဆရာတော်သည် သူဟောသော တရားကို အဆုံးမသတ်နိုင်ပေ၊ လည်ထွက်နေသည်၊ ချွေးသီးချွေးပေါက်များပင် ကျလာသည်၊ ဘေးမှ နွားကျောင်းရင်း တရားနာနေသော နွားကျောင်းသားသည် ထိုဆရာတော်၏ အခြေအနေကို ရိပ်မိလာသည်၊
“ ဒီဆရာတော်တော့ တရားလည်နေတယ်၊ တရားကိုလည်း အဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပေ၊ ငါ့ကယ်မှ ရတော့မယ်၊ ငါမကယ်ရင်တော့ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်တော့မည်၊” ဟု စဉ်းစာကာ အနီးအနားရှိ ကောက်ရိုးပုံကို မီးရှို့လိုက်လေသည်၊ ပြီးနောက် သူသည်
“မီးဗျို့ မီးဗျို့”ဟု အော်လိုက်လေသည်၊ ထိုအခါမှ တရားနာပရိသတ်သည် မီးလောင်းသည် ဖြစ်၍ တရားနာရာမှ ထွက်ပြေးကြလေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်သည်လည်း သူ၏လည်နေသော တရားကို အဆုံးသတ်ရန်လဲ မလိုတော့ပေ၊ အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲလည်း မဖြစ်တော့ပေ၊ မိမိစဉ်းစားမိသည်ကား
“ဆရာတော်သာ ဤအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိလျှင် နွားကျောင်းသားကို အထူးကျေးဇူးတင်နေမှာတော့ သေချာသည်၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ၏ အရှက်ကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့်ပေတည်း”ဟူ၍သာဖြစ်သည်။
Posted by AShin Javana at 9:39 PM0comments
“မိမိ၏ ဦးလေး ဦးခင်မောင်”
မိမိတို့ရွာတွင် စကားတတ်သော ဟာသဥာဏ်ရွှင်သော ဦးခင်မောင်ဟု အမည်ရသော ဒါယကာတစ်ဦး ရှိလေသည်၊သူသည် မိမိ၏ ဦးလေးဆိုလျှင်လည်း မမှားပါ၊ သူသည် အရက်ရောင်းသည်၊ တစ်နေ့ ကူမဲမြို့မှ သူ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ် သူထံမှ အလှူမင်္ဂလာဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာသည်၊ သူ့ဆီကို မရောက်မီ တစ်ခြားသူများထံ ရောက်ရှိသွား လေသည်၊ ဖ်ိတ်စာ၏ မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင် နာမည်ဟူသော နေရာ၌ ဦးခင်မောင် (UK) ဟူ၍ ရေးသား ဖိတ်မန်ထား လေသည်၊ မသိသောသူတို့က မေးကြလေသည်၊“ ဦးခင်မောင်ကိုတော့ သိပါတယ်၊ (UK) ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူက အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို သွားဖူးလို့လား”ဟု မေးကြလေသည်၊ ဤတွင်သိသူများက
“UK ဆိုတာ ရေကူ၊ ရေကူဆိုတာ သူက အရက်ရောင်းရာတွင် အရက်ထဲ ရေးရောထည့်၍ ရောင်းတဲ့အတွက် ကြောင့် UK ရေကူဟု ရေးထည့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ရှင်းပြကြလေသည်၊ “အော် ဒီတော့မှ UK၏ လေးနက်သော အဓိပ္ပာယ်ကို သူတို့သိကြရသည်.၊ တစ်နေ့ ကံကောင်းချင်တော့ မိမိ၏ ဦးလေး ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်သည် ရယက လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်၊ သူသည် ရယကလူကြီးအလုပ်ကို လုပ်၇င်း သူ၏ သားများနှင့်အတူဆေး သုတ်တဲ့ အလုပ်ကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေလေသည်၊ တစ်နေ့ မိမိသည် မိမိ၏ မယ်တော်ခမည်းတော်များက လှူတမ်းထားသော ဘုရားမုခ်ဦးကို ဦးခင်မောင်တို့ သားအဖတတွေအား ဆေးသုတ်ခိုင်းလေသည်၊ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်၏ သားဖြစ်သူ မောင်မောင်ထွန်းသည် မုခ်ဦးကို ဆေးသုတ်နေလေသည်၊ မိမိသည်လည်း မောင်မောင်ထွန်းနှင့် စကားပြောနေလေသည်။ ထိုချိန်တွင် ဦးလေးဖြစ်သူသည် စာအုပ်ကြီးကိုင်ပြီး မိမိတို့အနားသို့ ရောက်လာပြီ သူ့သားအကြီးကောင်ကို
“ဟေ မောင်မောင်ထွန်း! ဒီနေ့ ငါမလာနိုင်တော့ဘူး၊ ကူမဲမှာ စည်းဝေးပွဲရှိတယ်၊ မင်းကြည့်ပြီး မုခ်ဦးကို ဆေးကောင်းကောင်းသုတ်ထားလိုက်”ဟု ပြောပြီး စက်ဘီးတစ်စီးနှင့် ထွက်သွားလေသည်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ အဝေး ရောက်သွားသောအခါ သားဖြစ်သူက
“ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စာအုပ်ကြီးကိုင်လို့၊ စာကတော့ တစ်လုံးမှ မတတ်ဘူး၊” သားဖြစ်သူက ပြောနေလေသည်၊ မိမိလဲ မနေသာတော့သဖြင့်
“ဟာ မောင်မောင်ထွန်း! မင်း ကိုယ့်အဖေကို အဲဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာ”ဟု ကြားမှ ၀င်ရောက်တား ရလေ သည်၊
တစ်နေ့ သူ့သားအငယ်သည် ကျောင်းသစ်ကြီးကို ဆေးသုတ်ရင်း သူ၏ သူငယ်ချင်းကို သူ့အဖေ၏ ဂုဏ်ပုဒ်များကို ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားနေလေသည်၊ သူပြောသည်က
“ဒို့အဖေက လိမ်စရာမရှိရင် ကိုယ့်သားကိုတောင်ပြန်လိမ်တယ်ဗျ၊ တစ်နေ့ ဒို့ဆေးသုတ်ကောင်းလို့ ဆိုပြီး ကူမဲက သူဌေးအမကြီးက ဒို့သားအဖသုံးယောက်ကို ဆုချတဲ့အနေနဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည်စီပေးတယ်၊ ဒို့ကို မပေးဘူး၊ သူ့ဘာ သာဖြတ်သုတ်သွားတယ်၊ ဒို့လဲ အစက မသိဘူး၊ သူဌေးအမကြီးနဲ့တွေ့တယ်၊ သူပေးတဲ့ ပုဆိုးကောင်းလားမေး တော့ ဒို့လဲ မရတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်၊ အဲဒီမှ အဖေကို ပေးလိုက်ကြောင်းသိရတယ်၊ အော်တော်တော် ညာတဲ့ အဖေပါလားဆိုတာသိရတယ်လေ။ ” ဘေးမှ မတ်တတ်ရပ်၍ ကြည့်နေသော မိမိသည်
“အော် ဒီသားအဖတွေ လိုက်လဲ လိုက်ကြပါပေတယ်၊ အဖေကလဲ သား၇ယ်လို့ ညှာရကောင်းမှန်းမသိ၊ သားတွေကလဲ သူတို့ရဲ့အဖေကောင်းကြောင်းကို တစက်မှ မပြော၊” ဟု တွေး၍ သူတို့အစား ရင်လေးမိပါ တော့သည်၊
Posted by AShin Javana at 10:08 PM0comments
“ွှပညာရှိ ကိုရင်နှစ်ပါးတို့၏ ဆွေးနွေးခန်း”
မိမိသည် ရဟန်းသုံးဝါအရလောက်တွင် မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကြီး၌ စာချတန်း (ဓမ္မာစရိယ)စာဝါများ ကို လိုက်ရင်းသီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စာသင်သားသံဃာနှစ်ထောင်နီးပါးလောက် ရှိမည်ထင်ပါ
သည်၊ ယခုအခါ စာသင်သားသံဃာပေါင်း သုံးထောင်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သူငယ်ချင်းသံဃာများမှတစ် ဆင့် ကြားသိရသည်၊ မိမိသည် ထိုကျောင်းတိုက်၌ နေစဉ် ပညာရှင်ကိုရင်နှစ်ပါးတို့၏ ဆွေးနွေးခန်းကို သူငယ် ချင်းများမှ တဆင့် ပြောပြသဖြင့် ကြားသိခဲ့ရသည်၊ သူတို့၏ ဆွေးနွေးဟန်ကား ပထမကိုရင်တစ်ပါးသည်
“မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သားတော်သည် ရှင်ရာဟုလာဖြစ်တယ်”ဟု ဆိုလာသည်၊ သို့သော် ဒုတိယကိုရင်တစ်ပါးကတော့
”မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားကတော့ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ် ”ဟု ဆိုပြန်သည်။ ထိုကိုရင်နှစ်ပါးတို့ ငြင်းခုံမှုသည် မပြီးပြတ်မူ၍ ဆရာတော်ထံရောက်ရှိသွားသည်၊ ဆရာတော်သည် ပထမကိုရင်ကို
“ကိုရင်! မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်ရာဟုလာဖြစ်တယ်လို့ ကိုရင်ကပြောတယ်၊ ကိုရင်မှာ ဘာအထောက်အထားပြနိုင်ပါသလဲ ”လို့ မေးသည်။ ပထမကိုရင်သည်
“တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်ရာဟုလာဖြစ်ကြောင်းကို အထောက်အထားတော့ မပြနိုင်ပါဘူးဘုရား၊ သို့သော် မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်ရာဟုလာဖြစ်ကြောင်းကို ငယ်ငယ်က ဗုဒ္ဓ၀င်သင်ခဲ့လို့ သိရပါတယ်ဘုရား”ဟု ဖြေလေသည်။ ထို့နောက်ဆရာတော်သည် ဒုတိယကိုရင်ကို
“ကိုရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရင်ကပြောတယ်၊ ကိုရင်မှာ ဘာအထောက်အထားပြနိုင်ပါသလဲ ”လို့ မေးသည်။ ထိုအခါ ဒုတိယကိုရင်က
“တပည့်တော်မြို့ထဲ ဆွမ်းခံကြွစဉ် ဓမ္မာရုံတစ်ခုမှ သီချင်းဖွင့်သံကို ကြားခဲ့ရပါတယ်ဘုရား၊ ထိုသီချင်းထဲမှာ မြတ်ဘုရားရဲ့သားတော်ရှင်မောဂ္ဂလာန်လို့ကြားခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။ ဒါကြောင့် တပည့်တော်က မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်ဘုရား” ဟု လျှောက်ထားလေသည်၊ ဤတွင် ဆရာတော်သည်
“အေး ပထမကိုရင်က မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်ရာဟုလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထောက်အထားမပြနိုင်ဘူး၊ အေး ဒုတိယကိုရင်ကတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ဖြစ်ကြောင်းကို အထောက်အထားပြနိုင်တဲ့အတွက် ဒုတိယကိုရင်ကို အမှန်ပေးလိုက်တယ်ကွာ”ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်လေတော့သတည်း။
“အော် မြတ်စွာဘုရား၏ သာတော်သည်ကား ရှင်ရာဟုလာဖြစ်ကြောင်းကို လူတိုင်းသိသည်၊ ဒုတိယကိုရင်၏အထောက်အထားသည် ပညာရှင်များတောင်မှ ထောက်မပြနိုင်သော အထောက်အထားမျိုးဖြစ်၍ ဆရာတော်အမှန်ပေးလိုက်ဟန်ရှိ၏။” ဟု မိမိကောက်ချက်ချမိလိုက်သည်။
Posted by AShin Javana at 3:07 AM0comments
မိမိတို့၏ ရွာမှ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်သည် မိမိတို့၏ နယ်တွင် တရားဟောရာ၌ နာမည်ကြီးသည်။ ဆရာတော်သည် တရားဟောရာတွင် တရားနာပရိသတ်များနားလည်လွယ်စေရန် တရားဓမ္မများကို ကဗျာများစပ်၍ ဟော လေ့ရှိသည်၊ တစ်နှစ်က သင်္ကြန်တွင်း သင်္ကြန်အကြတ်နေ့အခါသမယဖြစ်သည်၊ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ မိမိတို့၏ ကျောင်းကြီးအတွင်း ဥပုသ်သည်များအပြည့်ဖြစ်သည်၊ ထို့နေက ဆရာတော် သည် ဥပုသ်သည်များကို ပို့ချပေးသော ကဗျာလင်္ကာလေးများကို မိမိ ယနေ့ထိ မေ့၍ မရသေးပါ၊ မှတ်မိနေပါသေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိသည် ဆရာတော်တရားဟောတဲ့အခါတိုင်း စက်ဖွင့်ပေးနေရ သောကြောင့်ပေတည်း၊ ဆရာတော်ပို့ချပေးသော လင်္ကာများသည်ကား
(၁) ဘုရားရှိခိုး မအိပ်တဲ့သူ ခွေးအိပ်ချင်းနဲ့တူ ခွေးလိုလူမဖြစ်လိုက ဘုရားရှိခိုးအိပ်စက်ကြ။
ဘုရားရှိခိုး အိပ်တဲ့သူ ဘုန်ကံကြီးမဲ့သူ ဘုန်းကံကြီးသူဖြစ်လိုက ဘုရားရှိခိုးအိပ်စက်ကြ။
ဗုဒ္ဓဿ ပူဇံ မဟာတေဇ၀န္တောဆိုသော ပါဠိကို ကြည့်၍ ဆရာတော်သည် အထက်ပါ လင်္ကာကိုစပ်ဆိုထားသည်။
(၂) တရားရှိခိုး မအိပ်တဲ့သူ ခွေးအိပ်ချင်းနဲ့တူ ခွေးလိုလူ မဖြစ်လိုက တရားရှိခိုး အိပ်စက်ကြ။
တရားရှိခိုး အိပ်တဲ့သူ ပညာကြီးမဲ့သူ ပညာကြီးသူ ဖြစ်လိုက တရားရှိခိုး အိပ်စက်ကြ။
ဓမ္မဿ ပူဇံ မဟာပညာဝန္တော ဟူသော ပါဠိကို ကြည့်၍ စပ်ဆိုထားသည်။
(၃) သံဃာရှိခိုး မအိပ်တဲ့သူ ခွေးအိပ်ချင်းနဲ့တူ ခွေးလိုလူ မဖြစ်ချင်က သံဃာရှိခိုး အိပ်စက်ကြ။
သံဃာရှိခိုး အိပ်တဲ့သူ ကြီးပွားချမ်းသာကြမည့်သူ ကြီးပွားချင်သူဖြစ်လိုက သံဃာရှိခိုးအိပ်စက်ကြ။
သံဃဿ ပူဇံ မဟာဘောဂန္တော ဟူသော ပါဠိကို ကြည့်၍ စပ်ဆိုထားသည်။
ဆရာတော်သည် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင် ဥပုသ်သည်များကို ထိုကဗျာများကို ရှေ့ကနေ ပို့ချပေးနေသည်၊ ထိုလင်္ကာများကို ချပေးပြီးနောက် ဆရာတော်သည်
“ချဲထီထိုးတဲ့သူ ခွေးလိုလူ ခွေးလိုလူ မဖြစ်ချင်က ချဲထီထိုးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ကြ” ဟူ၍ ရှေ့ကနေ ပို့ချပေး နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် တရားနာပရိသတ်အတွင်းမှ ဒါယကာမကြီး ဒေါ်ခင်အေး သည်
“ဆရာတော!် အဲဒါတော့ တော်တော်လွန်ပြီနဲ့တူတယ်၊ တပည့်တော်တို့က ချဲထိုးနေတာ၊ ဒါဆို တပည့်တော်တို့ပါ ခွေးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဘုရား” ဟူ၍ ထလျှောက်လေသည်၊ ထိုအခါမှ ဆရာတော်သည်
“အွန်း ပြောသာ ပြောရတယ် ဒကာမကြီးရယ် ဦးဇင်းလဲ ချဲထိုးတာဘဲ ဦးဇင်းလဲ ကိုယ့်ကဗျာနဲ့ကိုယ် ခွေးဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ၊ ”ဟု သူ့စကားသူ ပြန်၍ လျှော့ချသွားလေသည်၊ အနီး၌ ရှိနေသော မိမိသည် မရယ်မိစေရန် မနည်းကို ပါးစပ်ပိတ်ထားရလေသည်၊ မိမိ၏ စိတ်အတွင်းမှာတော့
“အော် ဆရာနဲ့ ဒကာ လိုက်လဲ လိုက်ကြပါပေတယ် ။ ”ဟု တွေးတောမိနေပါတော့သတည်း။
ဤစာမျက်နှာ၏ အဆုံး၌ older post ကို နှိပ်လိုက်လျှင် ပုံပြင်များစွာကို တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။
Posted by AShin Javana at 8:35 AM0comments
မိမိရွာမှ အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မိမိတို့၏ ရွာ၌ ဦးကျင်ဟိုက်အမည်ရှိသော တရုတ်ကြီးတစ် ယောက်ရှိသည်၊ သူသည် မိမိတို့၏ ရွာ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေထိုင်သွားခဲ့သည်၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လောက်က ၀မ်းတွင်းမြို့သို့ ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့သည်၊ ယခုအခါ ထိုမြို့တွင် ကြီးပွားနေပြီးဖြစ်သည်၊ ထိုဒါယကာကြီး ဦးကျင်ဟိုက်သည် ကျေးဇူးသိတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ သူငယ်စဉ်က နေခဲ့သော မိမိတို့၏ ရွာကို ကျေးဇူးဆပ်သော အနေဖြင့် ကထိန်လာရောက်ခင်းလေသည်၊ ကထိန်သင်္ကန်း နှင့်အတူ အခြားတန်ဖိုးရှိသော အသုံးအဆောင်မျိုးစုံကိုလည်း သဒ္ဓါတရားကောင်းစွာ လှုဒါန်းလေသည်၊ ကထိန် ခင်းသော ထိုနေ့က ဒါယကာကြီး ဦးကျင်ဟိုက်သည် ရွာအတွင်းရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်း ကျောင်းသို့ဖိတ်ကာ ထိုသက်ကြီးရွယ်အိုများအား တန်ဖိုးရှိသော အ၀တ်အစားများ ငွေမြောက်များစွာတို့ဖြင့် ကန်တော့လေသည်၊ ထိုကန်တော့ခံသော သက်ကြီးရွယ်များထဲတွင် ဒါယကာကြီး ဦးအုံးရွှေလည်း ပါဝင်လေသည်၊ ဒါယကာကြီးဦးအုံးရွှေသည် အရက်ကို အလွန်အမင်းသောက်သည်၊ မူးလာပြီဆိုလျှင် အိမ်က မိန်းမကို ရန်ရှာသည်၊ စကားကျယ်ကျယ်ပြောသည်၊ ယနေ့ ကန်တော့ခံမည့်နေမှာတော့ သပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင် လာတော့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်သဖွယ် ဖြစ်နေလေသည်၊ ကန်တော့သော အချိန်တွင် သူက ဆုပေး ရသည်၊သူပေးသော ဆုသည်ကား
“ဤကဲ့သို့ လှူဒါန်းရသော ကောင်းမှူကြောင့် ဦးကျင်ဟိုက်တို့ မိသားစုသည် နောက်နှစ်လည်း မိမိတို့အား လာရောက်လှူတမ်းနိုင်ပါစေသတည်း”ဟု ဆုပေးလိုက်လေသည်၊ ဦးအုံးရွှေ၏ ဆုပေးသံကို နားထောင်နေကြ သော ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွက်နေကြသော ရွာသူရွာသားများက
“ဘကြီးဦးအုံးရွှေကတော့ လိပ်မျိုးပဲ၊ ဆုပေးတာတောင် နောက်နှစ်လည်း သူတို့ကို လာလှူနိုင်ပါစေလို့ ဆုပေး တယ်၊ တော်တော်ပါးတဲ့ ဘကြီး”ဟု ဝေဘန်ကြလေသည်၊ အခမ်းအနားပြီးသောအခါ ဒါယကာကြီး ဦးအုံးရွှေသည် အလှူ့ဒါယကာကြီး ဦးကျင်ဟိုက်နှင့်အတူ ကျောင်းပေါ်မှ စကားပြောရင်းဆင်းလာလေသည်၊ ထိုအချိန်တွင် မိမိ၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုဝင်းမောင်က
“ဗျို့ဘကြီး ဦးအုံးရွှေ” ဟု လှမ်းခေါ်လိုက်သောအခါ ဒါယကာကြီးဦးအုံးရွှေက
“ဘာလဲကွ”ဟု ထူးလေသည်။ ဤတွင် မိမိဦးလေးဆက်ပြောလိုက်သည်ကား
“ဘကြီးတော့ ဒီနေ့ အရက်ဖိုး သုံးရက်စာလောက်တော့ တွက်ခြေကိုက်သွားပြီးထင်တယ်” ဟုနောက်လိုက် လေသည်၊ အလှူရှင်ရှေ့မှာ အဲဒီလို အပြောခံလိုက်ရတော့ ဒါယကာကြီးဦးအုံးရွှေလည်း တော်တော်ရှက်သွား သည်၊ သို့သော် ဟန်မပျက် စကားပြောရင်း လိုက်ပို့နှုတ်ဆက်လေသည်၊ ထို့နောက် ကိုဝင်းမောင်ထံ ရောက်လာပြီး
“မင်း တော်တော်ဆိုးတဲ့အကောင် ဒီက အလှူရှင် နောက်နှစ် လာလှူနိုင်အောင်လို့ စည်းရုံးနေတုန်းရှိသေးတယ်။ မင်းစကားကြောင့် ဟိုကအလှူရှင်စေတနာပျက်သွားတော့မယ်၊ နောက်နှစ်တော့ မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးပါပြီ၊”ဟု ငေါက်ငန်းကား ပြောဆိုပြီး အရက်ဆိုင်သို့ ချီတက်သွားလေတော့သတည်း။ “အော်ဒကာကြီး ဦးအုံးရွှေ သည်ကား သူ့အတွက် အရက်ဖိုး သုံးရက်စာတွက်ခြေကိုက်သွားပြီလေ၊ သူ့ခများ တနေကုန် တနေခမ်း ပင်ပန်း ထားတာတွေ ဒီအရက်ကလေးနဲ့ပဲ ဖြေဖျောက်ချင်မှာပေါ့”ဟု မိမိစိတ်အတွင်းက စဉ်းစားနေမိပါတော့သည်။
Posted by AShin Javana at 9:37 PM0comments
မိမိသည် ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းက ရွာတစ်ရွာသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်၊ မိမိရောက် သွားသော နေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်သည်၊ ထိုနေ့ည (ဂ)နာရီလောက်ရှိမည်ထင်ပါသည်၊ တီဗွီမှ မန်ချက်စတာ အသင်းနှင့် အာဆင်နယ်အသင်းတို့ ကစားနေကြသည်ကို တက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည်။ ပရိသတ်သည် ကား ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်အတွင်းအပြည့် ဘောပွဲကို အားပေးနေကြသည်၊ မိမိသည် ဘောလုံးပွဲဝါသနာ မပါသည့်အတွက်ကြောင့် ဆရာတော်ကြီးနှင့် စကားပြောနေလေသည်၊ ဆရာတော်သည်ကား အသက်ရှစ်ဆယ် နီးပါးရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ တီဗွီ, ဗွီဒီ, ကွန်ပြူတာ,ကာရာအိုကေ စသည်တို့အကြောင်းကို ဘာကိုမျှမသိရှာပါ၊ အလွန်ရိုးသားတော်မူပါသည်၊ နိုင်ငံခြားက ခေတ်ပေါ်ဘောပွဲများအကြောင်းဆိုရင်တော့ ဝေးရောပေါ့၊ သို့သော် ဆရာတော်သည် သိသလိုလိုနဲ့ ရမ်းပြောတတ်သော အလေ့တော့ရှိသည်၊ ဆရာ တော်ပြောလိုက်လျှင်လည်း အလွဲသာ များသည်၊ ဒီနေ့တော့ ဘောပွဲရှိသည့်နေ့ဖြစ်သည်၊ ဘောလုံးချစ်ပရိသတ် ကလည်း အသင်းနှစ်သင်းကို အားကြိုးမာန်တက် မျှမျှတတဘဲ အားပေးနေကြသည်၊ မန်ချက်စတာအသင်းကို ကြိုက်သော ပရိသည်ကလည်း မန်ချက်စတာအသင်းကောင်းကြောင်းကို အသားပေးပြောနေသည်၊ အားပေး နေသည်၊အာဆင်နယ်ကြိုက်တဲ့ အသင်းကလည်း အာဆင်နယ်အသင်းကောင်းကြောင်းကို အသားပေးပြော နေသည်၊ “အာဆင်နယ် အာဆင်နယ်” စသည်ဖြင့် အားကြိုးမာန်တက် အင်းတိုက်အားတိုက် အားပေးနေလေသည်၊
ဆရာတော်သည် ပရိသတ်က မန်ချက်စတာအသင်းကို အော်ဟစ်အားပေးနေစဉ် ဘာကိုမျှ မိန့်တော်မမူပါ၊ ပရိသတ်က အာဆင်နယ် အာဆင်နယ် စသည်ဖြင့် အားပေးတဲ့ အသံကို ကြားရတော့ ဆရာတော်က
“ဟေ့ကောင်တွေ အာစိဏ္ဏဘာဖြစ်လို့လဲကွ” ဟု စိုးရိမ်တကြီးမေးနေရှာသည်၊ ဤတွင် မိမိက
“ဆရာတော်! သူတို့က အာဆင်နယ်အသင်းအကြောင်းပြောနေတာ၊ ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ကျော်အာစိဏ္ဏ အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရား” ဟု လျှောက်ထားရလေသည်၊ ဤတွင်မှ ဆရာတော်က
“အော် မသိပါဘူးကွာ အာစိဏ္ဏများ တခုတခုဖြစ်သလား”လို့ စိုးရိမ်လို့ မေးတာပါကွာ ဟု ဖြေတော့ ဘောပွဲကြည့် ပရိသတ်သည်လည်း ဘောပွဲကိုတောင် အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘဲ ဆရာတော်စကားကြောင့် တသောသော ရယ်ကြရလေတော့သည်၊
“အော် ဆရာတော်ကြီးဘုရား အင်္ဂလန်က ဘောလုံးအသင်းအာဆင်နယ်နှင့် ဆရာတော်ရဲ့ တပည့်ကျော် ဦးဇင်း ဦးအာစိဏ္ဏနဲ့ လွှဲမှ လွှဲတတ်ပါပေ့ဘုရား” ဟူ၍သာ စိတ်အတွင်းမှ လျှောက်ထားမိပါတော့သည်။
Posted by AShin Javana at 10:14 AM0comments
အကျွန်ုပ်တို့ ရွာမှ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပေတည်း၊ ရွာမှ ကိုရင်မာဃိန္ဒနှင့် ကျောင်းသားများသည် ဂွေ့ကြီးရွာသို့ ဆွမ်းခံကြွသည်၊ ကိုရင်မာဃိန္ဒ၏ ဒေါ်လေး အပျိုကြီး မမိညိုသည် ထိုနေ့က လဘက်သုတ်ကို စပါယ်ရှယ်သုတ်၍ လောင်းလှူလိုက်လေသည်၊ ကျောင်းရောက်သောအခါ ရလာသော ဆွမ်း, ဆွမ်းဟင်းများကို ဆွမ်းပွဲဖြင့် ပြင်၍ ဆရာ တော်ကို ဦးစွာကပ်ကြလေသည်၊ ဆရာတော်နှင့်အတူ ကျောင်းရှိရဟန်းသံဃာများကို ရှေးဦးစွာ ဘုဉ်းပေးကြ လေသည်၊ ထိုစဉ် ကျောင်းရှိ ကိုရင်များ ကျောင်းသားများက ဆရာတော်၏အနီးအနားမှာ ရှိနေကြသည်၊ အကျွန်ုပ် သည်လည်း ဆရာတော်နှင့်အတူ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေပါသည်၊ ဆရာတော်သည် ဘုဉ်းပေးကောင်းကောင်းနှင့် လဘက်သုတ်ကို ဘုဉ်းပေးနေလေသည်၊ ဆရာတော်သည် ဘုဉ်းပေးရင်း
“လဘက်သုတ်က ဘယ်အိမ်က လောင်းလှူလိုက်တာလဲကွ” ဟု ကိုရင် ကျောင်းသားများကို မေးလေသည်၊ ထိုအခါ ကိုရင်မာဃိန္ဒက
“တပည့်တော်ရဲ့ ဒေါ်လေးက ကိုယ်တိုင်သုတ်ပြီး လောင်းလှူလိုက်တာပါဘုရား”ဟု လျှောက်ထားလေသည်၊ ထိုအခါ ဆရာတော်က
“မာဃိန္ဒ! လဘက်သုတ်ကတော့ အပြစ်မဆိုပါဘူးလို့ မင်းဒေါ်လေးကို ပြောလိုက်ကွာ ” ဟု ဆရာတော်က နောက်ပြောပြောလိုက်လေသည်၊ ကိုရင်မာဃိန္ဒကို စလိုက်လေသည်၊ သို့သော် ကိုရင်မာဃိန္ဒသည် ဆရာတော်ပြောသည်ကို အဓိပ္ပာယ်မပေါက်၊ နားမလည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်က
“မာဃိန္ဒ! အပြစ်မဆိုပါဘူးဆိုတာ သိလားကွလို့” မေးလေသည်။ ထိုအခါ ကိုရင်မာဃိန္ဒက
“ဘုန်းကြီးဘုရား တပည့်တော်နားမလည်ဘူးဘုရား” ဟု လျှောက်ထားလေသည်၊ ဤတွင် ဆရာတော်က
“မင်းတော်တော်အတဲ့ကောင်ဘဲ အပြစ်မဆိုပါဘူးဆိုတာ မင်းဒေါ်လေး အပျိုမစစ်ဘူးပြောတာကွ” ဟု နောက်ပြော ပြောလိုက်လေသည်၊ ညနေ ကိုရင်မာဃိန္ဒ၇ွာပြန်ကြွသောအခါ သူ၏ အဒေါ် အပျိုကြီးမမိညိုနှင့် တွေ့လေသည်၊ထိုအခါ ကိုရင်မာဃိန္ဒက
“ ဒေါ်လေး လဘက်သုတ်က ကောင်းလွန်းလို့ အပြစ်မဆိုးပါဘူးလို့” ဘုန်းကြီးက ပြောခိုင်းလိုက်တယ်” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။ အပျိုကြီးလဲ
“အပြစ်မဆိုပါဘူးဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ ကိုရင်ရဲ့”ဟု သိလိုဇောနှင့် မေးလေသည်။ ထိုအခါ ကိုရင်မာဃိန္ဒသည် ဆရာတော်က နောက်လိုက်သည်ကို နောက်လို့ နောက်မှန်းမသိ၊ ဒါရိုက်ပဲ ပြောချလိုက်သည်။
“ဒေါ်လေးကလဲ အပြစ်မဆိုဘူးဆိုတာ ဒေါ်လေးကို အပျိုမစစ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာ ဒေါ်လေးရ” ဟု ကလေးပီပီ မကွယ်မ၀ှက်ဘဲ ပြောချလိုက်လေတော့သည်၊ ထိုအချိန်မှ စ၍ အပျိုကြီးလည်း လဘက်သုတ်လဲ လောင်းလှူရ သေးတယ်၊ သူ့ကို အပျိုမစစ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်သောကြောင့် နှာကစ်သွားကာ အပြစ်မဆိုပါဘူးဆိုတဲ့ လဘက်သုတ်လောင်း လှူခြင်းကို သပိတ်မှောက်သွားလေတော့သတည်း။နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ဆရာတော်သည် ကိုရင်မာဃိန္ဒအား
“မင်းရဲ့ဒေါ်လေး လဘက်သုတ်မလှူတာ ကြာပါပြီ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလား” ဟုမေးလေသည်၊ ထိုအခါ ကိုရင်မာဃိန္ဒသည်
“တပည့်တော် ဒေါ်လေးကို ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်း ပြောလိုက်တယ်ဘုရား၊ အဲဒီအချိန်မှ စပြီး လဘက် သုတ်မလောင်း လှူတော့ဘူးဘုရား” ဟုလျှောက်ထားလိုက်လေသည်၊ ဤတွင်ဆရာတော်က
“ဟာ မာဃိန္ဒ! မင်းတော်တော်အတဲ့ကောင်ဘဲ ငါကမင်းကို စတာကွ၊ ဘာလို့သွားပြောလဲ”ဟု ငေါက်လေတော့သည်၊ ဆရာတော်လည်း နောက်မှ သူပြောတာကိုနောင်တရတော့သည်၊ သို့သော် နောင်တကား နောက်ကျသွားချေပြီ၊ ဆရာတော်နောင်တရလဲ အပျိုကြီးရဲ့ အပြစ်မဆိုပါဘူးဆိုတဲ့ လဘက် သုတ်ကတော့ နောက်တခါ လာမည်မဟုတ်တော့ချေ၊ အော် သတိထားဖွယ်ပါတကား။
Posted by AShin Javana at 10:31 AM0comments
ွှအကျွန်ုပ်တို့ရွာ၌ မောင်လှမျိုးအမည်ရှိသော လူငယ်တစ်ယောက်ရှိလေသည်၊ သူသည် အလွန်ဆင်းရဲသည်၊ ဆင်းတော့ ပညာလဲ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ခဲ့ရပေ၊ သုံးတန်းလောက်နဲ့ပဲ သူ၏ ပညာရေး အဆုံးသတ်လိုက်ရသည်၊ သို့သော် သူသည် ရိုးသားသည်၊ တဖက်သားကို ကူညီလိုစိတ်ရှိသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်သည် ကျောင်းအသစ်ဆောက်လုပ်ရာ၌ လက်သမားဆရာများကို တောက်တိုမယ်ရ ကူညီနိုင်စေရန် သူ့ကို ကျောင်းအိပ်ကျောင်းသားအဖြစ် ကျောင်းခေါ်ထားလေသည်၊ မောင်လှမျိုးသည် ကျောင်းဝေယျာဝစ္စများကို မပျင်းမရိလုပ်ဆောင်ပေးသည်၊ သို့သော် သူ့မှာ အကျင့်လေးတစ်ခုရှိသည်၊ သူသည် သိသလိုလိုနဲ့ ရမ်းပြောတတ်လေ့ရှိသည်။ သူပြောလိုက်လျှင်လည်း အမှားများသည်၊ တစ်နေ့ အကျွန်ုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ လက်သမားကောင်းလေးများနဲ့ စကားပြော၇န် သူတို့နေသော သိမ်တိုက်ဆီသို့ သွားရောက် ခဲ့ပေသည်၊ သိမ်တိုက်အနီးအနားရောက်သောအခါ မောင်လှမျိုးသည် လက်သမားကောင်လေးများကို မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းတော်တွေအကြောင်းကိုအားကြိုးမာန်တက်ရှင်းပြနေလေသည်။သူပြော သည်က
“ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က ရပာန်းတော်တွေက နံနက်ခင်းတိုင်း အာဂုဆွမ်းတွေ ဘုဉ်းပေးတာဗျ” တဲ့။ သို့ဖြစ်၍ မိမိလည်း ကမန်းကတန်းဝင်ရောက်သွားကာ
“လှမျိုးဆိုတဲ့ကောင် မသိရင်လဲ မပြောပါနဲ့ကွာ၊ ဘယ်ကလာ ရဟန်းတွေက အာဂုဆွမ်းဘုဉ်းပေးရမှာလဲ၊ ယာဂုဆွမ်းပါကွာ၊”ဟု မိမိက ၀င်ပြောတော့ လက်သမားကောင်လေးများက
“လှမျိုး မင်းက ငရွီးဘဲကွာ၊ ”ဟု ပြောပြီး ဟားတိုက်ရယ်ကြလေသည်၊
“အော် မိမိ ရောက်သွားလို့ပေါ့၊ မရောက်များ မရောက်ခဲ့ရင် မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က ရဟန်းတော်တွေ အာဂုဆွမ်းတွေ ဘုဉ်းပေးကြရတော့မည်၊ ပညာရှိ မောင်လှမျိုးလုပ်ပုံနဲ့ပေါ့။”
ကျောက်ပန်းတောင်နယ်အတွင်း ရွာတစ်ရွာ၌ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိလေသည်၊ ထိုဆရာ တော်ကြီးသည် ၀ါတော် (၆၅)၀ါ လောက်ရှိ၍ သက်တော်သည်ကား (၇၅) နှစ်လောက်ရှိမည်ထင်ပါ၏၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းသည်၊ ဆရာတော်သည် အလွန်ရိုးသားသည်၊ ဆရာတော်၏မျက်စိကတော့ အတော်မှုန်နေပြီဖြစ်သည်၊ ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ပါ၊ သို့သော် ဆရာတော်သည် ဘယ်သောခါမျှ မမြင်ဘူးဟူ၍ ၀န်ခံလေ့မရှိပါ၊ ခပ်တည်တည်ဘဲ မြင်သလို ဟန်ဆောင်ကာ နေလာခဲ့သည်၊ တစ်နေ့ အကျွန်ုပ်သည် ထိုရွာသို့ ရောက်ရှိသွားသည်၊ အကျွန်ုပ်သည် ထိုရွာမှ သူငယ်ချင်းဦးဇင်းများ, ဒါယကာကြီးများနှင့် စကားပြောနေလေသည်၊ ထိုစဉ် ဆရာတော်ကြီး သည် အပြင်မှ ရေချိုးပြီး ကျောင်းအတွင်းသို့ ၀င်လာလေသည်၊ ဆရာတော်သည် မျက်စိကမှုန်နေလေတော့ ကျောင်းအတွင်းထိုင်နေသော ဦးရန်ပကို တက်နင်းမိတော့ မလိုဖြစ်သွားသည်၊၊ ဤတွင် ဒါယကာများက
“ဘုန်းကြီး ရှေ့မှာ ဦးရန်ပ တက်နင်းမိအုံးမယ်” ၀ိုင်းဝန်းအော်လျှောက်ထားကြလေသည်၊ ထိုအခါ ဆရာတော်က
“မြင်ပါတယ်ကွ၊ ဒီ ရန်ပဆိုကောင် အများသွားတဲ့ လမ်းပေါ်ထိုင်နေလို့ တမင်သက်သက် တက်နင်းမလို့ကွ” ဟု ခပ်တည်တည်နှင့် ပြောလိုက်လေသည်၊ ဒကာများကလဲ ဆရာတော်နောက် ဖော်လိုလိုက်ကာ
“ဟုတ်တယ်ဘုရား ဦးရန်ပကလဲ လမ်းပေါ်ထိုင်နေတာ တက်သာနင်းပစ်ဆရာတော်”ဟု ပြောကာ ဟားတိုက်ရယ်ကြလေတော့သတည်း၊
တစ်နေ့ ထို ဆရာတော်ကြီးသည် မိမိတို့ ရွာသို့ အလည်ကြွတော်မူလာလေသည်၊ ထိုအချိန် မိမိ၏ ရွာကျောင်းဆရာတော်သည်ကား မရှိပေ၊ သို့ဖြစ်၍ မိမိသည် ဆရာတော်ကြီးအား ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုနေရလေသည်၊ တစ်နာရီလောက်စကားပြောပြိးနောက် ဆရာတော်ကြီးက
“ဇ၀နရေ ငါကုဋီသွားချင်တယ်ကွာ(ငါအိမ်သာ သွားချင်တယ်ကွာ) ဘယ်နားမှာလဲ ဟု မေးလေသည်၊ မိမိက
“ဆရာတော် အိမ်သာက ဆွမ်းစားကျောင်းမြောက်ဘက်မှာ၊ အနည်းငယ်ဝေးတယ်၊ ဆရာတော်က မျက်စိမှုန်တော့ မြင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ တပည့်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်၊” ဤတွင် ဆရာတော်က
“မြင်ပါတယ်ကွ၊ ငါဘာသာ ငါသွားမယ်၊ နေပါစေ”လို့ မိန့်တော်မူလေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ မိမိလဲ လိုက်မပို့တော့ပေ၊
သိပ်မကြာလိုက်ပါ ဆရာတော်၏ “အား” ဟူသော စူးစူးရှရှ အော်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်သည် ဆရာတော်နောက်သို့ ပြေးလိုက်သွားသည်။ မြင်ပါတယ်ကွလို့ ပြောသော ဆရာတော်ကြီးသည် အိမ်သာထဲရှိ အိမ်မက်ကမ္ဘာထဲ နက်မျောနေသော နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသော ခွေးနက်ကို တက်နင်းလိုက်လေသည်၊ ထိုအခါ ခွေးနက်သည် ဒေါသတကြီး ဆရာတော်၏ ပေါင်းကို ဖြတ်ကိုက်ပစ်လိုက်လေသည်၊ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး၏ နက်ရှိုင်း စူးရှသော အသံကြီးသည် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါပေသည်၊ထိုနေ့ ထိုအချိန်ခါမှစ၍ ဆရာတော်ကြီးသည် မိမိတို့ကျောင်းကို စိတ်နာပြီး “တော်ပြီးကွာ မင်းတို့ကျောင်းကို ဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူးကွား”ဟု ပြောပြီး ထွက်သွားလေတော့သတည်း။
သို့သော် ဆရာတော်ကြီးသည် သူ၏ မြင်ပါတယ်ကွ ဆိုသော အပြောကို တော့ လျှော့မှာ မဟုတ်တော့ ကြောင်းအကျွန်ုပ် ကောင်းကောင်းသိလိုက်ရပေသည်၊ တစ်နေ့ အကျွန်ုပ်သည် ဆရာတော်ကြီးရွာသို့ ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ရောက်ရှိသွားလေသည်၊ ထိုအချိန်၌ ဆရာတော်ကြီးသည် မျက်စိခွဲထားလေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်သည်
“ဆရာတော် မျက်စိအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲဟု မေးလျှောက်လိုက်လေသည်၊ ဆရာတော် က
မျက်စီခွဲလိုက်တာ ဟန်ကျတယ်ကွ၊ အပ်ပေါက်က အစ ယခုမြင်နေပြီကွ” တဲ့၊ ဤတွင် အနီးနားရှိနေသော လက်ထောက်ဆရာတော်က မိမိအား လက်ခါပြပြီး
“ဇ၀နရေ! မြင် မမြင်တော့ ငါမပြောလိုဘူး၊ ဆရာတော်နဖူးက ဒဏ်ရာတွေသာကြည့် ၊ မြင်တယ်ဆိုပြီ တစ်ပါးတည်းသွားလို့ တိုင်တွေနဲ့ တိုက်ထားလေ၊ နည်းတာမဟုတ်ဘူး၊”တိုးတိုးလေးလေးပြောပြလေသည်၊ ဤသို့ ပြောလိုက်မှ မိမိသဘောပေါက်လိုက်သည်၊ ဆရာတော်သည်ကား သူ၏ မြင်ပါတယ်ကွဆိုသော အယူအဆကို အသက်ထင်ရှားရှိနေသ၍ ပြောနေအုံးမှာဖြစ်လေတော့သတည်း။
Posted by AShin Javana at 12:03 AM0comments
“တိုက်လဲ တိုက်ဆိုင်တတ်ပါပေ့(အပိုင်း ၂)့”
တစ်နေ့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဝါယမသည် မြစ်သားမြို့နယ် ကုက္ကိုစုရွာ ကုက္ကိုစုကျောင်းသို့ ကြွရောက်လာလေသည်၊ ကုက္ကိုရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးနန္ဒသာမိသည်ကား တောင်းဦးရွာမှပင်ဖြစ်လေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ သူငယ်ချင်းထံ အလည်အပတ်ကြွရောက်လာ ခြင်းဖြစ် လေသည်၊ဆရာတော်သည် ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် တစ်ပတ်လောက် သီတင်းသုံးသွားမည်ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ထားလေသည်၊ တစ်နေ့သော နံနက်မှာတော့ ကျောင်းမှ ကပ္ပိယကြီးဦးဓာတ်ပြားသည် ရေနွေးတည်ရန်အတွက် ကိုရင်ဝါယမအား
“ဟေ့ ၀ါယမကြီး ထကွ၊ ဟေ ၀ါယမကြီး ထကွ” ဟု အသံကျယ်ကြီးနှင့် လာရောက်နှိုးလေတော့သည်၊ ကပ္ပိယကြီး ဦးဓာတ်ပြားသည် ကျောင်းမှာ အနေကြာလာတော့ ကိုရင်များကို မလေးစားတော့ပေ၊ ကိုရင်ဝါယမလို့ ရိုသေစွာ ခေါ်ရမည့်အစား ၀ါယမလို့ဘဲ ခေါ်နေတော့သည်၊ ကိုရင်ဝါယမက မနိုးဘဲ အာဂန္တုကဆရာတော်ဦးဝါယမက နိုးလာပြီး ထကောပါလေတော့သည်၊
”ဟ ဒကာရ ရိုင်းလှချည့်လား ၀ါယမ ၀ါယမနဲ့၊ ဦးဝါယမဆိုပြီး ရှေ့က ဦးလေးတော့ ရိုရိုသေသေ ထည့်ခေါ်အုံးမှပေါ့ကွ၊ မင်းတို့ရွာသားတွေက ဒီလိုရိုင်းစိုင်းကြတာဘဲလား” တဲ့ ၊
“အော် ဆရာတော်တော့ မှားပြီနဲ့တူတယ်၊ တပည့်တော်က ဆရာတော်ကိုတော့ မလေးမစား ဘယ်ခေါ်ရဲပါ့မလဲ ဘုရား၊ ကျောင်းက ကိုရင်ဝါယမကို ဆရာတော်တို့အတွက် ရေနွေးတည်ရအောင်လို့ လားနှိုးတာဘုရား၊ ”တဲ့ ထိုအခါ ဆရာတော်သည် သူအလွန်အမင်း ကပ္ပိယကြီးဦးဓာတ်ပြားကို ငေါက်လိုက်မိတဲ့အတွက် အားနာ ပါးနာဖြစ်ကာ
“အော် ဒကာကြီး ဦးဇင်း မှားသွားတယ် ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ခင်ဗျာတို့ ဘုန်းကြီးကလဲ အခြားဘွဲ့ပေးစရာရှားလို့ (အခြားအမည်ပေးစရာရှားလို့) ကျုပ်နဲ့မှ ဘွဲ့တူလာပေးရတယ်လို့ ပြော မပြောချင်ပါဘူး”ဟု
ပြောဆိုကာ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားလေတော့သတည်း။
Posted by AShin Javana at 2:29 AM0comments
“တိုက်လဲ တိုက်ဆိုင်တတ်ပါပေ့ (အပိုင်း ၁)”
တစ်ခါက ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာမှ ဦးပေါက်စီသည် မိတ္ထီလာမြို့သို့ ဈေးဝယ်သွားလေသည်၊ ဈေးဝယ်ပြီးနောက် သူ၏ရွာသို့ရောက်သော ကျောက်ပန်းတောင်းကားပေါ်တွင် ထိုင်နေလေသည်၊ ထိုစဉ် ပေါက်စီရောင်းသော ကလေးတစ်ယောက်သည် ထိုကားအနီးသို့ ရောက်လာ၍“ပေါက်စီ”ဟုအော်လိုက်လေ
သည်၊ ထိုအခါ တောင်ဦးရွာမှ ဦးပေါက်စီက သူ့ကို ခေါ်တယ်ထင်ပြီး “ဘာလဲကွ“ ဟုထူးလိုက်လေသည်၊ ကလေးက ပေါက်စီလို့အော်လိုက်တိုင်း ဦးပေါက်စီက “ဘာလဲကွ” ဟုထူးနေတော့သည်၊ ဤတွင် ကလေးက စိတ်မရှည်တော့ပါ၊ သူ့ကို စတယ်ထင်ပြီး
”ဦးလေးကြီးနော် ကျုပ်ကို မစနဲ့ ၊ဒီက ပေါက်စီရောင်းမကောင်းလို့ စိတ်တိုနေတာဗျာ့၊” ထိုအခါ ဦးပေါက်စီက
“ငါ့နာမည်က ပေါက်စီလေကွာ၊ ငါ့ခေါ်တယ်ထင်လို့ ထူးတာပေါ့ကွ၊” ဟု ပြောဆိုသော အခါ ကလေးက
“အော် ဦးလေးကြီး နာမည်က ပေါက်စီလား၊ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ၊ ကျွန်တော်ကလဲ ပေါက်စီရောင်းနေတာဗျ”ဟူ ဖြေကြားလေသည်၊ ဦးပေါက်စီလဲ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သွားပြီ
“အော် မသိပါဘူးကွာ ငါကလဲ ငါ့ကို ခေါ်တယ်ထင်လို့ ထူးတာပေါ့ကွ” ဖြေလိုက်လေသည်၊
“အော် ဆုံမှ ဆုံတတ်ပါပေ့ ဦးပေါက်စီနှင့် စားစရာပေါက်စီရယ်” လို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
Posted by AShin Javana at 12:54 AM0comments
အကျွန်ုပ်တို့၏ ရွာ၌ မဌေးဆိုသော အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိလေသည်၊ သူမသည် အရပ်(၅)ပေ ခြောက်လက်မ ခန့်ရှိမည်ထင်၏၊ သူမသည် အလွန်လှပသည်၊ မာနကြီးသည်က တစ်ချက်၊ မိဘများက သူမ လိုချင်သော အမျိူးသားနှင့် မပေးစားသည်က တစ်ချက်၊ ဤသို့သော အကြောင်းများကြောင့် အသက်လေးဆယ်ကျော်ထိ အပျိုကြီးဘ၀ဖြင့် နေခဲ့ရသည်၊
တစ်နေ့ ရွာမှ သူမထက်အသက်ငယ်သော သူမအိမ်တွင် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်ပေးနေသော လူပျိုကြီးကိုဝင်းအောင်နှင့်ချစ်ကြိုက်သွားကြလေသည်၊လူပျိုကြီးဆိုသော်လည်းအပျိုကြီးမဌေးထက်အသက်ငယ်သည်၊
အပျိုကြီးမဌေးသည် ဤအကြောင်းကို မိဘများကို ဖွင့်ပြောလေသည်၊ မိဘများသည် တဖက်ကောင်လေးက ဆင်းရဲတော့ သဘောမတူခဲ့ပေ၊ သူတို့ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မီလျယန်နာတွေလို့ ထင်ကောင်းထင်နေမှာပေါ့၊
သူတို့မှာ လယ်ဆယ်ဧကလောက်နှင့် နွားနှစ်ကောင်ရှိကြတာကိုး၊ ဒီတခါက အပျိုကြီးမဌေး စွန့်စားလေပြီ၊ သူမကြိုက်နှစ်သက်သော ကိုဝင်းအောင်နောက်လိုက်ပြေးလေတော့သည်၊
မီလျယန်နာမိဘများက ဆင်းရဲသားလေးနောက် လိုက်ပြေးရမလားဆိုပြီ အမွေပြတ်၊ သေခန်းပြတ် သမီးအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်လေသည်၊
အပျိုကြီးမဌေး ချစ်လို့သာ ရည်းစားနောက်လိုက်ပြေးသည်၊ ဟိုမှာ နေစ၇ာက ကောင်းကောင်းမရှိ၊ အိမ်နောက်ဖေး အဖီတဲလေးထိုးပြီးနေကြရသည်၊
အခန်းလေးကကျဉ်းတော့ အပျိုကြီးမဌေးခမျာ အသက်ရှုတောင် ၀မယ်မထင်၊ ဒီလိုနှင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဇနီး မောင်နှံနှစ်ယောက်နေလာကြသည်၊
ကြာတော့ အပျိုကြီးမဌေး ရောဂါစွဲကပ်လာပြီ၊ ရောဂါစွဲကပ်လာတော့ မိဘထံပြန်လိုသော စိတ်များဖြစ်ပေါ် လာသည်၊ သူမကိုယ်တိုင်လဲ သွားမပြောရဲ၊
သို့နှင့် ရပ်ရွာမှ လူကြီးများကို အပူကပ်လေတော့သည်၊ ရပ်ရွာလူကြီးများသည်လည်း အပျိုကြီးမဌေး၏ မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးခင်မောင်+ဒေါ်ဝင်းတို့ကို သွားရောက်၍ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ပြန်လက်ခံရန်အတွက် ဖြောင့်ဖြပြောဆိုကြလေသည်၊ ဦးခင်မောင်က လက်မခံနိုင်ကြောင်း ငြင်းရုံမျှမက လူကြီးများကိုပင် ငေါက်ငန်းလွှတ်လိုက်လေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ လူကြီးများလည်း စိတ်ညစ်ပြီ ပြန်လာခဲ့ကြရလေသည်၊ သူသမီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင်အိမ်အရိပ်ကိုပင် လာမနင်းနဲ့ ဟူ၍ပြောလွှတ်လိုက်သေးသည်၊ အပျိုကြီးမဌေးလဲ မိဘများထံပြန်လည်ကပ်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့သည်၊ မအောင်မြင့်ခဲ့ပါ၊ တစ်နေ့ လသာသောည တစ်ည၌ အကျွန်ုပ်သည် ကျောင်းသား ကိုရင်များအား ပုံပြင်ပြောပြနေလေသည်၊
ထိုအချိန်တွင် အပျိုကြီးမဌေးတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် အကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိလာလေသည်၊ အကျွန်ုပ်လည်း
“ဒကာမကြီးမဌေး ဘာအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ ညကြီးမင်းကြီး ဦးဇင်းဆီရောက်လာတာလဲ” ဟု မေးလိုက်လေသည်၊ ထိုအခါ အပျိုကြီးမဌေးက
“တပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အိမ်မှာ ပြန်နေခွင့်ပေးဘို့ အမေနဲ့ အဖေကို ပြောပေးပါလား ဦးဇင်းရယ်“ တဲ့၊ ဤတွင်မိမိက
“ဒကာမကြီးမဌေး မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်၊ ခင်ဗျားရဲ့ အဖေ အမေအကြောင်းလဲ ခင်ဗျားသိသာနဲ့ ၊ ကျုပ်က ခင်ဗျားအဖေကို သွားပြောမယ့်အစား ကျားမြီးတောင်သွားဆွဲလိုက်ချင်သေးတယ်” ဟူ၍ မိမိကပြောသောအခါ
“ဦးဇင်းရယ် တပည့်တော်တို့မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေနေရတယ်၊ တပည့်တော်တို့ကို သနားသောအားဖြင့် သွားပြောပေးပါ” ဟူ၍ အတင်းပြောလာ အသနားခံလာလေတော့ မိမိလဲ တဖက်သားကို သနားတတ်သူပီပီ
”အေးဗျာ ဒါဆိုလဲ သဘက်ခါကျမှ သွားပြောပေးပါမယ်၊ “ဟူ၍ ၀န်ခံလိုက်လေသည်၊ ထိုကိစ္စကို မိမိမှ သွားရောက်၍ မပြောရသေးပါ ၊ထိုသတင်းဟာ ဒါယကာကြီး ဦးခင်မောင်ထံ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်လေသည်၊ ဒီနေ့ညတော့ ငါပြောမယ်လို့ဝန်ခံထားသည့်ညရောက်လာလေပြီး၊
သို့ဖြစ်၍ မိမိသည်လည်း သင်္ကန်းသေချာဝတ်ရုံပြီး ဒကာကြီးဦးခင်မောင်တို့ အိမ်ဘက်ဆီသို့ ချီတက်သွား လေသည်၊ အဝေးက မိမိလာနေသည်ကို မြင်သော ဒါယကာကြီး ဦးခင်မောင်သည်
”ငါ့သမီးကိစ္စကို ဘယ်ကောင်လာပြောပြော လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဘယ်ဘုန်းကြီးပြောပြောလက်ခံနိုင်ဘူး၊ အကယ်၍ ဘုန်းကြီးလာပြောရင်လဲ အဲဒီဘုန်းကြီးကို ဆွမ်းမလောင်းဘူး”
ဟူ၍ မိမိကြားအောင် အော်ပြောလိုက်လေသည်၊ ထိုအသံကို ကြားလိုက်ရသောအခါ အကျွန်ုပ်၏ ခြေလှမ်းများသည် ရှေ့သို့တက်ရန် အင်အားများမရှိတော့ပါ၊ သို့ဖြစ်၍ နောက်သို့ ပြန်လည် ဆုတ်ခဲ့ရလေသည်၊ ထိုအခါ
“အော် မောင်ဇ၀န! ကိုယ့်ကျောင်းမှာကို အသာမနေဘဲ သူများကိစ္စ၀င်ရှုပ်တာ၊ အပြောခံရနည်းသေး၊ မင်းကို ဒုတ်နဲ့ပစ်မလွှတ်တာ ကံကောင်းလို့မှတ်“ဟူ၍ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ငေါက်ငန်းနေမိတော့သည်။
အပျိုကြီးမဌေးလဲ မျှော်လင့်ချက်နှင့် အကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိလာသည်၊ အကြောင်းစုံကို ပြောပြလိုက်တော့ သူမလဲ စိတ်ပျက်ပြီး ပြန်သွားလေတော့သည်၊ ဒီလိုနှင့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံပေါင်းလာလိုက်သည်မှာ တစ်နှစ်ခန့်ရှိလာ လေသည်၊ စီးပွားတော့ တက်မလာပါ၊ သမီးလေးတစ်ယောက်တော့ ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ သမီးဖြစ်သူ မဌေးမှ သမီးလေးမွေးဖွားတယ်လို့ သတင်းကြားလိုက်ရသော ဒကာကြီးဦးခင်မောင်နှင့် ဒကာမကြီးဒေါ်ဝင်းတို့သည် သူတို့၏ မြေးလေး ဘယ်လောက်ချော ဘယ်လောက်လှသလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုကြသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဘေးအိမ်မှ တစ်ဆင့် မြေးလေးကို ခိုးတွေ့ကြသည်၊ကြာလာတော့ မြေးသံယောဇဉ်ကြောင့် သေခန်းပြတ်ဟူ၍ပြောဆိုနေ ကြသော ဒကာကြီး ဦးခင်မောင်နဲ့ ဒကာမကြီးဒေါ်ဝင်းတို့သည် သမီးနှင့် သမက်ကို လက်ခံလိုက်လေ တော့သတည်း၊ သူတို့ မိသားစုတွေကတော့ အဆင်ပြေသွားကြပြီ၊ အကျွန်ုပ်မှာတော့
“ဒကာကြီးဦးခင်မောင်ရေ! 'ဘယ်ဘုန်းကြီးပြောပြော လက်မခံနိုင်ဘူး၊ အကယ်၍ ဘုန်းကြီးလာပြောရင်လဲ အဲဒီဘုန်းကြီးကို ဆွမ်းမလောင်းဘူး' ဟူသော ဒကာကြီးရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ပြောလိုက်သော စကားသံများမှာ နားထဲက မထွက်သေးတဲ့ အတွက် အိမ်မပျော် စားမ၀င် ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါဝေဒနာကြီးကို ခံစားနေရတယ် ဒကာကြီးရေ” ဟူ၍ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
တစ်နေ့ အကျွန်ုပ်သည် ဥပုသ်သည် ဒါယကာမကြီးများနှင့် အလ္လာပ သလ္လာပစကားပြောနေလေသည်၊ ထိုစဉ် ရွာအတွင်းမှ မခင်ဌေးဝင်အမည်ရှိသော အမျိုးသမီးသည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ပြာပြာနှင့် ရောက်ရှိလာသည်၊ သို့နှင့် အကျွန်ုပ်သည်
“ဟ မခင်ဌေးဝင် ပြာပြာနဲ့ ဘာဖြစ်လာသလဲ” လို့ မေးလိုက်လေသည်၊ထိုအခါ မခင်ဌေးဝင်းသည်
တပည့်တော်မရဲ့ ယောက်ကျားကို သေသွားတဲ့ ကိုစိန်ဝင်းက ၀င်ပူးနေလို့ပါဘုရား၊ အဲဒါဦးဇင်း အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားရွတ်ပေးပါအုံးဘုရား၊” ဟုလျှာက်လာလေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ မိမိသည် လိုက်ရွတ်ပေးပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိပေးလိုက်လေသည်၊ သေသွားသော ကိုစိန်ဝင်းဟူသည်ကား မခင်ဌေးဝင်း၏ အမဖြစ်သူ မတင်ဝင်း၏ ယောက်ကျားဖြစ်လေသည်၊ မခင်ဌေးဝင်း၏ ယောက်ကျားသည်ကား ကိုအောင်ခင်ဖြစ်သည်၊ ကိုစိန်ဝင်းသည် ကိုအောင်ခင်ကို ၀င်ပူးနေလေသည်၊ သို့နှင့် အကျွန်ုပ်လည်း ကျောင်းက ဦးဇင်းတစ်ပါးခေါ်ကာ လိုက်သွားလေသည်၊အိမ်ရောက်သောအခါ အကျွန်ုပ်အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်သည်၊ မခင်ဌေးဝင်းယောက်ကျား ဖြစ်သော ကိုအောင်ခင်သည် သေသွားသူ ကိုစိန်ဝင်း၏ မိန်းမဖြစ်သူ(မတင်ဝင်း)ကို အတင်းဖက်ပြီး ငိုယိုပြောနေလေသည်၊ သူပြောသည်က
“မိန်းမရယ် ငါဟာ ယခုအခါ သရဲ(တစ္ဆေ)ဖြစ်နေရတယ်၊ ရွာရဲ့အနောက်ဖက်က သုဿန်မှာနေရတယ်၊ စားစရာမရှိ၊ မင်းနဲ့ ငါ့သားလေးတွေကို လွမ်းလိုက်တာ၊ဒါကြောင့် ငါ ဒီကို ရောက်လာတာ” ဟုပြောပြီ ကလေးနှစ်ယောက်ဖက်လိုက်၊ မတင်ဝင်းဖက်လိုက်ပေါ့၊ အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်နေသည်၊ မိမိလည်း ရောက်လျှင်ေ၇ာက်ချင်း
“ကဲ ဒကာကြီး ဒကာမကြီးတို့ သီလယူကြရအောင်၊ ရတနာသုံးပါးကန်တော့ကြပါ၊” ဟု တိုက်တွန်းလိုက်လေသည်၊ သီလပေးပြီ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ပရိတ်စတင်ရွတ်ကြလေသည်၊ မိမိတို့ ကျက်မှတ်ထားသော ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်သာ ကုန်သွားသည်၊ ကိုစိန်ဝင်းကလဲ မထွက်သေး၊ ကိုအောင်ခင်ကလဲ မတင်ဝင်းနှင့် သူ့မသားတွေကို အတင်ဖက်ပြီး ငိုယိုကာ အလွမ်းသည်နေလေသည်၊ အကျွန်ုပ်လည်း အလွန်စိုးရိမ်လာသည်၊ အကယ်၍သာ ကိုစိန်ဝင်းထွက်မသွားပါက အကျွန်ုပ်တို့သည် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာပေတော့မည်၊လူတွေကလဲ ၀ိုင်အုံကြည့်နေကြသည်၊ အကျွန်ုပ်လည်း ချွေးဇောများပင် ပြန်လာတော့သည်၊ ကိုအောင်ခင်ကတော့ မတင်းဝင်းကို ဖက်မြဲဖြစ်သည်၊ ကိုအောင်ခင်သည် အရက်ကို အလွန်အမင်းသောက်လေ့ရှိသည်၊ အကျွန်ုပ်ပါးစပ်မှ ရုတ်တရက်
“မတင်ဝင်းရေ! ဦးဇင်းတို့လဲ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ အကုန်ရွတ်ဖတ်ပေးပြီးပြီ၊ ခင်ဗျားယောက်ကျား ကိုစိန်ဝင်း ၀င်ပူးတာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး၊ ကျုပ်အထင်တော့ ကိုအောင်ခင် အမူးလွန်ပြီး ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ ဦးဇင်းထင်တယ်”ဟူ၍ ပြောလိုက်သောအခါ သေသွားသော ကိုစိန်ဝင်း၏ ၀င်ရောက်ပူးဝင်ခြင်းကို ခံနေရသော ကိုအောင်ခင်သည် မိမိအား
“ဦးဇင်း တပည့်တော်အဲဒီလောက်မမိုက်ရိုင်းဘူး၊”ဟု ဒေါသတကြီးမိမိအား ပြန်ပြောကာ ပရိသတ်ကြားမှ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း တိုးထွက်ပြီး ယိုင်ထိုးယိုင်ထိုးနှင့် သူ့အိမ်ဘက်ဆီသို့ ထွက်သွားလေတော့သတည်း၊ ထိုအခါ ရွာမှ လူကြီးတွေကလဲ
“အောင်ခင်ဆိုတဲ့ကောင် ကိုယ်ဘာသာမူးတဲ့ကိစ္စ တင်ဝင်းမိသားစုကို ဒုက္ခလာပေးတယ်၊ ဒီကောင် တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်”ဟူ၍ တီးတိုးတီးတိုးပြောသွားကြသည်။ မိမိသည်လည်း
“ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ရွတ်ဖတ်ထားသော အကျွန်ုပ်၏ ပါးစပ်သည်ကား တော်တော်အစွမ်းထက်ပါကလား” ဟုမိမိကိုယ်ကို မိမိဂုဏ်ယူနေမိတော့သည်။ကိုအောင်ခင်ကတော့ မိမိအား အမုန်းပွားကောင်း ပွားလာနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိသည် သူ့အား အမှန်အတိုင်း လူအများကြားတွင် ပြောလိုက်သောကြောင့်ပေတည်း၊
တစ်နေ့ ထိုအကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ အကျွန်ုပ်သည် မိမိဆရာသမားအား လျှောက်ထားမိသည်၊ ဆရာတော်က
“မောင်ဇ၀နရေ! နောင်ဒါမျိုးပေါ်လာလျှင် ပရိတ်မရွတ်နဲ့၊ ဒုတ်တုတ်တုတ်နဲ့သာ ဆော်ပေး၊ ဒါမှ နောက်မပူးရဲတော့မှာကွ၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ၀င်ပူးနေအုံးမှာကွ” ပြတ်သားစွာ မိန့်ကြားတော်မူပါပေသည်။
ဤစကားနှင့်စပ်၍ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသေးသည်၊ တခါက ဆရာတော်တစ်ပါးနှင့် ကပ္ပိယတို့သည် တောလမ်းအတိုင်း ခရီးထွက်လာကြသည်၊ တစ်နေရာအရောက် ကျွဲတစ်ကောင်နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့လေသည်၊ ထိုအခါ ဆရာတော်သည်
“အမောင်ကျွဲ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ”ဟု မေတ္တာပို့နေလေသည်၊ သို့သော် ကျွဲကြီးသည်ကား ဆရာတော်နှင့် ကပ္ပိယကို ဝှေ့ရန် နောက်မဆုတ်ဘဲ ရှေ့သို့သာ တိုးလာလေသည်၊ ထိုအခါ ကပ္ပိယက အနီးရှိ ကျောက်ခဲတစ်လုံးကို ကောက်ယူ၍ ထိုကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်လိုက်လေသည်၊ ထိုအခါမှ ကျွဲကြီးသည်လည်း တဟုန်ထိုးထွက်ပြေးလေတော့သည်၊ ဤတွင် ဆရာတော်သည်
“အော် ကပ္ပိယကြီးရေ! ကပ္ပိယကြီးရဲ့ ကျောက်ခဲက ဦးဇင်းရဲ့ မေတ္တာထက် အစွမ်းထက်ပါလား”ဟူ၍ ချီးကျူးမိန့်တော်မူလေသည်။ မိမိစဉ်းစားမိသည်ကား
“အော် မိမိဆရာသမားပြောသလို တခါတလေတော့လဲ တရားနဲ့ မ၇ပါးလား၊”ဟူ၍ပင် ဖြစ်လေတော့သတည်း။
ဤစာမျက်နှာ၏ အဆုံးတွင် older post နှိပ်လိုက်ပါ၊ နောက်ထပ်ပုံပြင်များကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
Posted by AShin Javana at 10:43 PM0comments
“အကျွန်ုပ်တို့ရွာမှ ပညာရှိ မောင်ဂွတို”
အကျွန်ုပ်တို့ရွာ၌ မောင်ဝင်းညွန့်ဦးဆိုသော လူငယ်တစ်ယောက်ရှိသည်၊ သူသည် အရပ်အလွန်ပုသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်သည် သူ့ကို “ဂွတို”ဟူ၍ နာမည်သစ်ပေးလိုက်လေသည်၊ ထိုအချိန်မှ စ၍ ရွာသူရွာသားများကလည်း သူ့ကို “ဂွတို”ဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုကြလေသည်၊ ဤနေရာ၌ မောင်ဂွတို၏ အရည်အသွေးကို အနည်းငယ်ပြောပြပါရစေ၊ မောင်ဂွတိုသည် ငါးနှစ်သားအရွယ်တွင် စာပေပညာသင်ကြားရန် သူ့၏ အမေဖြစ်သူဒေါ်ထွေးမှ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံတွင် လာရောက်အပ်နှံသွားလေသည်၊ သူသည် အလွန်အင်မတန်မှ ဥာဏ်ထိုင်းသည်၊ မောင်ဂွတိုလက်ထက် အကျွန်ုပ်တို့ရွာတွင် ကျောင်းထိုင်တော်မူသွားသော ဆရာတော်များသည် သုံးပါးရှိပြီဖြစ်လေသည်၊ သို့သော်မောင်ဂွတို၏ ပညာအရည်အသွေးသည်ကား“ကကြီရေက ကကြီးရေးချကာ” မှ တက်မလာပေ၊ သင်ပုန်းကြီးနှင့်ပင် လည်ထွက်နေသည်၊ ဘုန်းကြီးသုံးဆက်ပင် ရှိသွားပြီးဖြစ်လေသည်၊ သို့ဖြစ်၍ သူ့၏ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ထွေးသည်
“ငါ့သားလေး စာမတတ်တာ ဘုန်းကြီးကျောင်းထားလို့ဖြစ်မှာ” ဟူသော အတွေးဝင်လာလေသည်၊ ထို့ကြောင့် ဒေါ်ထွေးသည် သားဖြစ်သူကို အစိုးရ စာသင်ကျောင်းသို့ ပြောင်းထားလေသည်၊ သူသည် ဆရာမများထံ သူသားကို အပ်နှံရာ၌
“ဆရာမရယ်! ကျမသားလေး ဘုန်းကြီးကျောင်းထားတာ စာမတတ်လို့ ၊အဲဒါ ဆရာမဆီကို လာအပ်တာပါ” ဟူ၍ ဆရာတော်များကိုပင် အပြစ်ပြောလိုက်သေးသည်၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာမသည် မောင်ဂွတိုအား တစ်နှစ်လောက် စာသင်လိုက်သေးသည်၊ သို့သော် “က, ခ,”စသည်က တက်မလာပေ၊ ဆရာမလည်း မောင်ဂွတိုကို စာသင်ရသည်မှာ စိတ်ညစ်လာသည်၊သို့ဖြစ်၍ သူမသည် မောင်ဂွတိုကို သူ့အမေလက် ပြန်အပ်လိုက်ရလေသည်၊ထိုစဉ် အကျွန်ုတို့ရွာသို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အသစ်တစ်ပါးရောက်ရှိလာလေသည်၊ ထိုဆရာတော်သည် ဥာဏ်ကောင်းသည်၊ ပညာတတ်သည်၊ စည်းကမ်းကောင်းသည်၊ စာသင်ရာတွင်လည်း အလွန်တော်သည်၊ သို့အတွက်ကြောင့် ဒေါ်ထွေးသည် သူ့သား မောင်ဂွတိုကို ပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် ထိုဆရာတော်အသစ်ထံ အပ်နှံလေပြန်သည်၊ မောင်ဂွတို၏ အကြောင်းကိုလဲ ရွာအတွင်းမှ ဒကာ ဒကာမများလျှောက်ထားပြီးဖြစ်၍ ဆရာတော်ကြိုတင်သိရှိနေပြီး ဖြစ်လေသည်၊ သူ့ကို လာအပ်စဉ်က ဆရာတော်က
“ဒကာမကြီးဒေါ်ထွေးရေ! ကျုပ်နဲ့ တွေ့ရင် ဒကာမကြီးရဲ့သား ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့သာ အောက်မေ့လိုက်တော့”ဟူ၍ ဆရာတော်သည် အားကြိုးမာန်တက်ပြောလိုက်သေးသည်၊ ဆရာတော်သည် မောင်ဂွတိုကို ဖိဖိစီးစီး စာသင်ပေးလိုက်လေသည်၊ သင်ပုန်းကြီးကုန်၍ ငါးပါးသီလအနက်ပေးအထိ ရောက်ရှိလာလေပြီ ဖြစ်သည်၊ ဆရာတော်လည်း သူ့ကိုသူ ဂုဏ်ယူနေသည်၊ မောင်ဂွတိုသည် သူ့လက်ထက်တွင် ပညာအရည်အသွေးမြင့်လာလေပြီးဖြစ်လေသည်၊တစ်ည ဘုရားဝတ်တက်ပြီးနောက်ဆရာတော်သည် သူ့၏ တပည့်ကျော်ကိုရင်များကို ငါးပါးသီလအနက်(ငါးပါးသီလအဓိပ္ပာယ်) ကို တစ်ပါးစီပြောခိုင်းလေသည်၊ မောင်ဂွတိုအလှည့်ရောက်သော အခါ “အဗြဟ္မစရိယာ” ပါဠိပုဒ်ကို အနက်ပေးခိုင်းလေသည်၊ အဓိပ္ပယ်ပြောခိုင်းလေသည်။ မောင်ဂွတို၏ အနက်ပေးလိုက်သည်ကား(အဓိပ္ပယ်ပြောလိုက်သည်ကား)
“အဗြဟ္မစရိယာ၊ မေထုန်နွားတို့ကို တပိုးကောက်ခြင်းမှ” ဟူ၍ ပညာရှင်များမှတ်သားစေရန် အနက်ပေးလိုက်(အဓိပ္ပယ်ပြောလိုက်)လေသတည်း၊ “အဗြဟ္မစရိယာ၏ အနက်အမှန် အဓိပ္ပာယ်မှန်သည်ကား မမြတ်သော မေထုန်အကျင့်တို့ကို ကျင့်ခြင်းမှ” ဟူ၍ပင်ဖြစ်လေသတည်။ ဤသည်ကား မောင်နကြီး မောင်ဂွတိုနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းပေတည်။
တခါက စာမတတ်သော မိသားစုတစ်စုရှိလေသည်၊ ထိုမိသားစုမှာ မိဘနှစ်ပါး၊ သားတစ်ယောက်ဟူ၍ သုံးယောက်သာရှိလေသည်၊ မိဘနှစ်ပါးသည် စာမတတ်ကြပါ၊သိ်ု့သော်သူတို့သည် သူတို့၏သားလေးကို ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်သည်၊ သို့ဖြစ်၍ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပင် အတန်းကျောင်းကို ပို့ထားလေသည်၊ တစ်နေ့ ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သား စာဘယ်မျှလောက်တတ်ပြီလဲဆိုသည်ကို သိလိုသည့်အတွက် “ငါ့သား ကျွဲကို စာလုံးပေါင်းပြစမ်းပါ”ဟုမေးလေသည်၊ ထိုအခါ သားဖြစ်သူက
“အဖေကလဲ သားက ကျောင်းနေတာမှ မကြာသေးတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွဲကို စာလုံးပေါင်းတတ်မှာလဲဗျ” ဟု အကြောင်းပြလာလေသည်၊ ဤတွင် ဖခင်ဖြစ်သူက
“မင်းကလဲ ကျွဲတောင် စာလုံးပေါင်းမရဘူး၊ ငါ့ ပေါင်းပြမယ်၊ နားထောင်၊ ကျွဲရေးချကျွဲ”တဲ့ ၊ထိုအခါ ဇနီးမယားဖြစ်သူက အောက်ပါအတိုင်း ပြောလိုက်လေသည်။
“တော်က ကျွဲစာလုံးပေါင်းရမှာပေါ့၊ လူကြီးကိုး” တဲ့၊ မိမိကောက်ချက်ချမိလိုက်သည်ကား
“အော် ဒီမိသားစုထက်သာရင် ဒို့ရွာက ပညာရှိကြီးမောင်ဂွတိုကမှ တော်သေးဟ”ဟူ၍သာဖြစ်လေသတည်း။
Posted by AShin Javana at 9:18 PM0comments
တစ်ခါက စာချဆရာတော်နှစ်ပါး တွေ့ဆုံကြလေသည်၊ တစ်ပါးသည် သီလရှင်ဆရာလေးများကို စာချလေသည်၊ တစ်ပါးသည်ကား ရဟန်းသာမဏေများကို စာချပေးနေလေသည်၊ ထိုတွင် ရဟန်းသာမဏေများကို စာချပေးနေသော ဆရာတော်က သီလရှင်ဆရာလေးများကို စာချပေးသော ဆရာတော်ကို မေးလေသည်၊
“ဆရာတော်! သီလရှင်ဆရာလေးတွေကို စာချပေးရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား” ဟုမေးလေသည်။ ထိုအခါ သီလရှင်ဆရာလေးများကို စာချပေးသော ဆရာတော်က
“ဆရာတော်ရေ! သီလရှင်ဆရာလေးတွေကို စာချပေးရတာ တော်တော်စာချပေးရကျိုးနပ်ပါပေတယ်၊ ကျောင်းရောက်တာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးကြတယ်၊ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ဟင်းတွေကို ချက်ပြုတ်ပြီး မကြာမကြာ ကပ်လေ့ရှိတယ်၊ အစစအရာရာ လုပ်ဆောင်ရာမှာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိလှပါပေတယ်ဘုရား၊ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဘုရား၊ ရေသောက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ သောက်ရေခွက်ကို သေချာဆေး၊ ရေကို ရေစစ်နဲ့ သေချာစစ်ပြီး ရိုရိုသေသေ ကပ်တာဘုရား၊”တဲ့၊ ထို့နောက်
“အရှင်ဘုရားကော ဘယ်လိုလဲဘုရား” လို့ သီလရှင်ဆရာလေးများကို စာချပေးသော ဆရာတော်သည် ရဟန်းသာမဏေများကို စာချနေသော ဆရာတော်ကို မေးလေသည်။ ဤတွင် ရဟန်းသာမဏေများကို စာချပေးနေသော ဆရာတော်က
“မပြောချင်ပါဘူး ဆရာတော်! ဆရာလေးတွေလို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆိုတာ ဝေးလို့၊ ဟိုတစ်နေ့က ဖန်းခါးသီးလေး စားချင်လို့ သွားခူးစမ်းပါ မောင်ပဇင်းရယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လေ၊ သွားတော့ခူးပါတယ်၊ ခူးပုံကတော့ ပြောပြရအုံးမယ် ကိုယ်တော်ရေ့၊ သူစီးတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ပစ်ချပြီး ရေလေးနဲ့တောင် မဆေးဘူး ၊ လာကပ်တယ် ဆရာတော်ရေ၊ ဆရာတော်ရဲ့ဆရာလေးတွေနဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ ကျောင်းက ကောင်တွေနဲ့တော့ ကွာပါပေတယ် ဆရာတော်ရယ်၊” ဟု ငြီးတွားပြီး ပြောပြရှာလေတော့သတည်း။
Posted by AShin Javana at 9:25 PM0comments